အချစ်ရေး – BurmeseHearts http://www.burmesehearts.com Online courses marketplace in Burmese language. Becomeastudent, becomeateacher, learn Thu, 29 Nov 2018 07:26:45 +0000	en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.1.1 http://www.burmesehearts.com/wp-content/uploads/2015/09/cropped-SortingBurmeseNumbersA-32x32.png အချစ်ရေး – BurmeseHearts http://www.burmesehearts.com 32 32 မမြင်နိုင်သော အားနည်းချက်များ၏နောက်ကွယ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba/#respond Wed, 05 Sep 2018 10:10:27 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74738
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%81%a0%e1%80%b3%e1%80%90%e1%81%b3%e1%80%ad%e1%80%9a%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%9f%e1%80%b0%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9/feed/0ကျန်ရစ်ခဲ့သူမဖြစ်လိုပါ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ab/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ab/#respond Wed, 28 Dec 2016 06:17:34 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71083
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ab/feed/0အချစ်စစ်ကိုရှာဖွေရင်း အချိန်တွေကုန်မှာစိုး http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%bc%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%80%a1/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%bc%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%80%a1/#respond Mon, 30 May 2016 12:57:28 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=55830
သမီးကညာအခါမလင့်စေနဲ့ စကားဟာ မိန်းကလေးတွေ အရွယ်မလွန်ခင် အိမ်ထောင်ရက်သားပြုဖို့ မိဘတွေကို တိုက်တွန်းထားတာပါ။ ကျွန်မသဘောကတော့ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိထားတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကိုယ့်ဘဝအဖော်မွန်ကို မျက်စိဖွင့် နားစွင့်ပြီး နှလုံးကားကော ၊ ဦးနှောက်ပါသုံးလို့ ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ နှလုံးသားကော ၊ ဦးနှောက်ပါ သုံးခိုင်းသလဲဆို တဖက်ကန်းနေမှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုရှင်းအောင်ပြောရရင် နှလုံးသားခံစားချက်ကိုချည်းနားထောင်ရင် ဦးနှောက်က သတိပေးနေနိုင်တာတွေကို လျစ်လျူရှုရှေ့ဆက်လို့ အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီးမှ ခြေလှမ်းတွေလွန်လို့ အပျိုလည်းပြန်မဖြစ်နိုင် ၊ တည်ပြီးသားအိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း မပျော်မွေ့ ၊ ခင်ပွန်းတာဝန် ကလေးတာဝန် အိမ်ဝေယျာဝစ္စ စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ ဖြစ်သင့်သော ဘဝပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတွေကို မခံစားလိုက်ရဘဲ လုံးပါး ပါးသွားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ချည်းပဲတွက်ချက်သုံးလို့ အိမ်ထောင်ပြုပြန်တော့ မေတ္တာတရားရဲ့ အနှစ်သာရဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်က ဘယ်လိုဂရုတစိုက်ပေးရမှန်းမသိ ၊ ဦးနှောက်နဲ့ တွက်ချက်ယူခဲ့တဲ့ကိုယ့်ကို ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်က စိတ်ကုန်လာတဲ့တနေ့မှာ ငွေပုံပေါ်ထိုင်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ ဘဝမျိုးလည်း ကြုံနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှလုံးသားကော ၊ ဦးနှောက်ပါ ဟန်ချက်ညီညီ ခံစားတွေးခေါ်ပါမှ ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာကို ခံစားကောင်း ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂါတ်ဆိုတာ မရေရာလှတာမို့ နှလုံးသားကော ၊ ဦးနှောက်ပါသုံးရင် ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေး လုံးဝရရှိစေမယ်လို့တော့ ဘယ်သူမှ အာမ မခံနိုင်ကြပါဘူး။ လူဆိုတာ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘာဝရှိတာကိုး။ သူလည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ ကိုယ်လည်း ပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်လေ။
ကိုယ်တိုင်က အိမ်ထောင်သားမွေးပြုတာကို စိတ်မဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကွဲကွာသွားခဲ့သူကို မေ့မရလို့ ၊ သူ့နေရာအစားထိုးမရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တသက်တာ လုံးဝ တကိုယ်ရည်နေပြီး အရိုးထုတ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ငယ်ငယ်ကတော့ ဟိုလူ့ရွေးရကောင်းနိုး ၊ ဒီလူ့ရွေးရကောင်းနိုး ၊ အိမ်ထောင်ပြုချင်သလိုလို မပြုချင်သလိုလို ၊ စိတ်ပဲမဝင်စားသလိုလိုနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်သားလှဘဲ အရွယ်လွန်ကာနီးမှ အနားရှိရာနဲ့ငြိပြီး မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အပျိုကြီး ၊ လူပျိုကြီးတွေအကြောင်းလည်း ကြားဖူး ၊ မြင်ဖူးတာမို့ ဒီလိုတော့လည်း မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ တလျောက်လုံးထိန်းထားခဲ့တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ဒီအရွယ်ကြီးကျမှ ဒီတခုအတွက် ကျသွားရတယ်ဆိုတာမျိုးက မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။
တကယ်ဆို တစ်ယောက်တည်းနေသွားတာက အများအမြင်မှာ အဖော်မစုံ အထီးကျန်သလိုလိုရှိပေမယ့် လင်ပူ ၊ သားပူ ဖြစ်နေတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေထက်တော့ အများကြီးသာတယ်လေ။ အိမ်ထောင်သည်တိုင်းဟာ အိမ်ထောင့်သုခနဲ့ မိသားစုပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို ခံစားရတာမဟုတ်ဘဲ အဖော်မွန်ကောင်းနဲ့ ပေါင်းဖက်မိတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေသာ အိမ်ထောင့်သုခနဲ့ မိသားစုပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မကို တခါတရံ တကိုယ်တည်းအားငယ်မိတယ်လို့ ရင်ဖွင့်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ကို လင်ပူ ၊ သားပူမိနေတဲ့ သူတွေရဲ့အဖြစ်တွေကို ပြောပြတာမျိုး ၊ ပေးဖတ်တာမျိုးလုပ်လိုက်တော့ သူ့ဘဝ ဘယ်လောက်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သူ့ဘာသာ ခံစားမိတော့တယ်။ အိမ်ထောင်ဆိုတာ ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ဆို တော်သေးရဲ့ ၊ မကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ကို မနှစ်မြို့ဘဲပေါင်းနေရတာထက်စာရင် အပျို ၊ လူပျိုဂုဏ်လေးက ကိုယ့်အတွက် ပိုတင့်တယ် ၊ အေးချမ်းလှပါတယ်။
တချို့ကျတော့ သစ္စာတရားကို ခုတုံးလုပ်သူတွေနဲ့ တွဲနေမိလို့ မကုန်သင့်ဘဲ အချိန်တွေကုန်သွားခဲ့ရတာ ၊ ဒီတစ်ယောက်ကိုပဲ အချိန်ပြည့်အာရုံစိုက်နေရတော့ ကိုယ့်အပေါ် ဒီ့ထက်ပိုကောင်းနိုင်တဲ့သူ (ပိုချစ်နိုင်တဲ့သူ) ကိုယ့်အနားရှိနေသည့်တိုင် သတိမထားမိတာ ၊ တန်ဖိုးမထားမိတာတွေကြောင့် တွဲနေတဲ့သူနဲ့လွဲချိန်မှာ အလွမ်းတွေ ၊ အဆွေးတွေ ၊ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ပြန်ကုစားရင်း အချိန်လွန်သွားတာတွေလည်း တွေ့ဖူးတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဆိုတာ ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းက သနားတတ်ပြီး နူးညံ့တဲ့စိတ်သဘောထားရှိသူတွေများတာမို့ ကိုယ့်အပေါ်နည်းနည်းကောင်းရင် အားနာတာနဲ့ ၊ သနားတာနဲ့ ၊ ကိုယ်ချင်းစာတာတွေနဲ့ တကယ်ပဲ ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ချစ်သူ ၊ အနစ်နာခံတဲ့သူဆိုရင် သံယောဇဉ်လေးရစ်တွယ်မိတာနဲ့ ချစ်တယ်ရယ်လို့ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ဒီလိုသဘောမျိုးရှိတာမို့ တကယ်ပဲ အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းနဲ့ စုံဖက်ချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ့်အပေါ် တသက်တာ ကောင်းတဲ့သူကို ဦးစားပေးရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြောတော့လွယ်လွယ်လေး ၊ တကယ်ကောင်းတဲ့သူက ဂျိုပေါက်နေတာမျိုးမဟုတ်တာမို့ တသက်တာကောင်းသွားနိုင်တဲ့သူဆိုတာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲနော်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် နှလုံးသားခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ကိုယ်တွေနှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ကိုယုံကြည်လို့ သစ္စာတရားကိုအားကိုးပြီး တဦးတယောက်အတွက် ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးလောက် အချိန်တွေကုန်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာ ဒီအချိန်တွေ ပြန်ယူခွင့်ရရင် ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီး ပြောင်းလဲလိုက်ချင်သလားဆို ဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါလို့ ကျွန်မဆိုမှာပါ။ ထားပါတော့။
ဒီတစ်ယောက်နဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့အချစ်ကို အတော် စိတ်ကုန်သွားခဲ့တဲ့ကျွန်မ တယောက်တည်းအရိုးထုတ်ရကောင်းနိုး ၊ သူနဲ့လွဲသွားလို့ ဘယ်သူ့မှကိုယ့်ယူတဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့လည်း သူအပါအဝင် သူများတွေထင်မှာစိုး ၊ သူ့ထက် ကိုယ့်အပေါ် ပိုကြင်နာတဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလည်း သက်သေပြချင် ဒီလိုအတွေးတွေ ၊ ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ကို တသက်တာ ချစ်မြတ်နိုးနားလည်လို့ သည်းခံပြီး သစ္စာရှိရှိပေါင်းသွားမယ့် အဖော်ကောင်းဆိုတာကို စမ်းသပ်ရှာဖွေခဲ့ပါတော့တယ်။
အဖော်ကောင်းလို့ ဘယ်လို စမ်းသပ်ရှာဖွေသလဲ သိချင်ကြမှာပဲနော်။ ကျွန်မရဲ့ခံယူချက်က ရှင်းပါတယ်။ ကိုယ်အခုလို ငယ်တုန်း ၊ လှတုန်း ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတုန်း ၊ တက်နေတဲ့အရွယ် ၊ သူနဲ့မယူရသေးတဲ့ အပျိုဘဝမှာတောင် ကိုယ့်အပေါ်ကို စိတ်မရှည် ၊ သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူနဲ့ လက်ဆက်ပေါင်းသင်းမိရင် ကိုယ်အိုလာတဲ့အခါ ၊ ရုပ်ရည်က ဆွဲဆောင်မှုမရှိတော့ဘဲ အလှအပတွေ ယိုယွင်းလာတဲ့အခါ ၊ သူနဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေ ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့အခါမှာ သူဟာ ကိုယ့်အပေါ်ကို အရင်လို နားလည်စွာ စိတ်ရှည် သည်းခံနိုင်ပါတော့မလား။သေချာတာကတော့ ဆယ်စုနှစ်မပြောနဲ့ ငါးနှစ်လောက်အတွင်း သူမပြောင်းလဲရင် ကိုယ်တော်တော် ကံကောင်းလို့ပဲလေ။ ဒီတော့ ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့်သူရဲ့ ကိုယ့်အပေါ်ကို နားလည်နိုင်စွမ်း ၊ ယုံကြည်နိုင်စွမ်း ၊ သည်းခံနိုင်စွမ်း ၊ သစ္စာရှိနိုင်စွမ်းဆိုတာ ရေရှည်လက်တွဲဖို့ စဉ်းစားတဲ့သူတိုင်းကို စတင်လေ့လာစမ်းသပ်တော့တာပဲ။
အစမ်းသပ်ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ မသက်သာလှဘူးပေါ့။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ ကိုယ်နဲ့ တသက်တာပေါင်းဖက်ချင်တယ်ဆို ဒီလောက်တော့ သည်းခံစိတ်ရှည်ရမယ်ထင်တာပဲ။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်တသက်တာ စိတ်ချရမှာမဟုတ်လား။ ကျွန်မကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း ပြသလာတဲ့သူ ၊ ချစ်ရေးဆိုထားတဲ့သူ ၊ ချစ်သူရည်းစားအဖြစ်တွဲနေတဲ့သူဆို သူတို့နဲ့ ချိန်းတဲ့အချိန်တွေကို နေပြင်းချိန်မှာ ၊ မိုးသည်းချိန်မှာ ချိန်းဆိုပြီး တခါတလေသွား ၊ တခါတလေ မသွားတာမျိုးလုပ်တယ်။ တခါတလေ ကိုယ်ကသွားပေမယ့် တနေရာကနေ သူ့အခြေအနေကို သူမသိအောင် စောင့်ကြည့်တာမျိုးလည်းလုပ်တယ်။
ဒီလိုဆို သူ့သည်းခံနိုင်ရည် ပါးပါးလေးကို စမ်းသပ်နိုင်ပြီး သူ့စိတ်တိုင်းကျမဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာ သူဟာ အရွဲ့တိုက်တတ်သလား ၊ ဒေါသတကြီးတုန့်ပြန်တတ်သလား ၊ မောက်မောက်မာမာ ဆက်ဆံတတ်သလား ၊ ကိုယ့်အပေါ်ကို ဘယ်လောက်အထိ သည်းခံနိုင်ပြီး ကိုယ်ရှင်းပြမယ့် စကားလုံးတွေ ၊ အကြောင်းပြချက်တွေဆိုတာကို နားထောင်သလဲ ၊ နားထောင်ပေးချင်စိတ်ရှိသလဲ ၊ ဘယ်လောက်အထိ နားလည်ပေးလိုစိတ်ရှိသလဲဆိုတာကို စမ်းသပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုမစမ်းသပ်ခဲ့ဖူးဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ရှိချိန်တိုင်း ပြုံးနေမယ့် သူ့အပြုံးတွေသာ ကိုယ်ခံစားနိုင်ပြီး နောင်အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ ကြုံတွေ့လတ္တံသော နှစ်ဦးအဆင်မပြေမှုဆိုတာတွေ ၊ ကိုယ့်ဘက်က အမှားတွေကို သူဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲလို့ စေ့စေ့စပ်စပ် ဘယ်ခံစားသိနိုင်ပါ့မလဲနော်။
တခါတလေ တခြားအမျိုးသားလေးတွေနဲ့ အလုပ်သဘောအရ ၊ ခင်မင်မှုအရ သူ့ထက်ပိုဦးစားပေးလိုက်ဖြစ်တဲ့ အနေအထားတွေကိုလည်း ဖန်တီးဖြစ်တယ်။ ဒါကတော့ သူဟာ ကိုယ့်အချစ်အပေါ်မှာ ၊ ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့ စာရိတ္တအပေါ်မှာ ဘယ်တော့အထိ ယုံကြည်မှုထားသလဲ ၊ ကိုယ့်အပေါ် ဘယ်လောက်အထိ နားလည်မှုပေးနိုင်သလဲ ၊ ဘယ်လောက်အထိ ခွင့်လွှတ်သည်းခံနိုင်စွမ်း ထားရှိသလဲဆိုတာ စမ်းသပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မက ကျွန်မကို ချုပ်ချယ်တာမျိုးမကြိုက်သူမို့ သူ့အပေါ်ကိုလည်း လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝကို ပေးထားတယ်။ ဒီလိုပေးထားတဲ့နေရာမှာ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေ ၊ အမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးဆိုတာကို ဝင်စွက်ဖက်ခြင်းမလုပ်သလို သူ့ဖုန်းကိုစစ်တာ ၊ သူ့ပိုက်ဆံအိတ်စစ်တာ ၊ ဟိုမေးဒီမြန်းနဲ့ မယုံမကြည်စစ်ဆေးတာတွေလည်း မလုပ်ဘူး။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမချောချောလေးတွေနဲ့ သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသလို လမ်းသွားလမ်းလာတွေ့ရှိတဲ့ မိန်းကလေးချောချောလေးတွေကို သူမမြင်ရင်တောင် လှလိုက်တာလို့ရေရွတ်ပြီး သူကြည့်မိအောင် ကြိုးစားဖြစ်တယ်။ ကျွန်မသိချင်တာကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပေါ် သူဘယ်လောက်အထိ တောင့်ခံနိုင်သလဲဆိုတာ သိချင်တာပါ။ ကျွန်မနဲ့ မပေါင်းခင်ကတောင် တခြားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုမှာ တောင့်မခံနိုင်ရင် ၊ သစ္စာမထားနိုင်ရင် အိမ်ထောင်ကျပြီးရင် ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာ သိရအောင် သူနဲ့ပေါင်းဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ သေချာပေါက် ဖောက်ပြန်မယ့်သူလေ။ ဒီလိုလူမျိုးတော့ ကန်တော့ဆွမ်းပေါ့နော်။
ကိုယ်တိုင်က အသောက်အစား ၊ လောင်းကစားနဲ့ အပျော်အပါးတွေဆိုတာကို စိတ်အပါကြီးမရှိပေမယ့် စိတ်ပါသယောင် သူ့ကိုပါလှမ်းဆွယ်တာမျိုးလည်း လုပ်တတ်သေးတယ်။ တကယ်ဇရှိတဲ့သူက အစလေးဖော်လိုက်တာနဲ့ ဇ ပေါ်လာတတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဝါသနာဆိုတာဟာ ရေရှည်မှာ အယောင်ဆောင် ဖုံးကွယ်ရကောင်းရိုး ထုံးစံမရှိဘူးလေ။ အခါအခွင့်သင့်လို့ ရာသီဥတု ကိုယ့်ဘက်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ ဝါသနာဗီဇတွေ တဖွားဖွားပေါ်လာတတ်တာမို့ ဒီလိုစမ်းသပ်တာပါ။ အတိုင်းအတာတခုအထိ ခွင့်လွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတာ နားလည်ထားပေမယ့် ကိုယ့်နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်စွမ်းဘောင်ကို ကျော်နေနိုင်သူ ၊ ဒီဘက်မှာ ဇရှိနေသူဆိုတာ သိလိုက်ရင်တော့ ကံကို ကိုယ့်ဘဝနဲ့ လောင်းကြေးမထပ်ဘူးလေ။
ဒီလို ဒီလိုတွေ စမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ (လက်ရှိခင်ပွန်းဖြစ်လာမယ့်သူ)ကို ရွေးချယ်လက်တွဲခဲ့တာပါပဲ။ ချစ်တာနဲ့ သံယောဇဉ်လေးလည်း ပါတာပေါ့။ ဒီလိုစမ်းသပ်နေလို့ ရည်းစားတွေအများကြီး တပြိုင်တည်းထားရတာလားဆို မဟုတ်ပါဘူး။ မျက်နှာများစရာမလိုဘူး။ ကိုယ်က သစ္စာရှိတဲ့သူလိုချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း သစ္စာရှိရမယ်လေ။ ဒီလိုစမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်နေစဉ်မှာ သူနဲ့ကိုယ် ရည်းစားဖြစ်နေရမယ်လို့လည်း မဆိုလိုဘူး။
ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ ကိုယ့်အနားကပ်နေပြီ ၊ ခွါရလည်းခက် ၊ ငြင်းလို့လည်းမရ ၊ ငြင်းလို့လည်းမကောင်း ၊ သူ့အကြောင်းပိုသိချင်လာရင် အဲဒီအမျိုးသားကို သူအကြောင်း ပိုသိလာအောင် ၊ ကိုယ်နဲ့ စိတ်သဘောချင်း ကိုက်ညီသူ ဟုတ် မဟုတ် ပိုသိလာအောင် ၊ ကိုယ့်တဘဝလုံးစာအတွက် အဖော်ကောင်း ဟုတ် မဟုတ် ပိုသေချာရအောင် စမ်းသပ်တာပါပဲ။ သိုးရေခြုံထားတဲ့မြေခွေးတွေကတော့ ဒီစမ်းသပ်မှုလေး မပြင်းမီမှာတင် တပ်ခေါက်နောက်ဆုတ် လမ်းခွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်တဲ့ငါးမကြီးနဲ့ ၊ ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ မယူဖြစ်တာပဲ ကျေးဇူးတင် ၊ ဒီလိုလူမျိုးနဲ့လွဲသွားပေမယ့် ကိုယ့်အပေါ် တကယ် ချစ်မြတ်နိုး ၊ သစ္စာရှိ ၊ တာဝန်သိတဲ့သူနဲ့ လက်တွဲခွင့်ရှိသေးတယ်။ အဖော်ကောင်းနဲ့ တသက်တာ ပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်။
ပျိုမေတိုင်းကိုလည်း ဟိုလူကောင်းနိုး ၊ ဒီလူကောင်းနိုး တွဲရင်း ၊ ရွေးရင်းကနေ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘဝအချိန်တွေ မကုန်စေချင်တဲ့အတွက် ဒီပို့စ်ကိုရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေး ထူထောင်လိုတဲ့ပျိုမေတိုင်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေး ရရှိကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%bc%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%80%a1/feed/0လူပျို ၊ အပျိုဖော်ဝင်စ သားသမီးများအား သင်ပြခြင်း http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ad%e1%80%b3-%e1%81%8a-%e1%80%a1%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%9d%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%85-%e1%80%9e-2/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ad%e1%80%b3-%e1%81%8a-%e1%80%a1%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%9d%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%85-%e1%80%9e-2/#respond Sat, 19 Dec 2015 02:26:06 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=23609
မြန်မာလူမှုဝန်းကျင်မှာ သားသမီးဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် မိဘတွေဟာ ကလေးလို့ပဲမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားက ကြားလို့သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ ဝေးကွာနေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားရှားလည်း ပြနေတာပါ။ ကိုယ်တိုင်က အသက်သုံးဆယ်နီးမှ ဒါမှမဟုတ် သုံးဆယ်ကျော်မှ အိမ်ထောင်ပြုရင်လည်း ပြုဖြစ်မှာပေါ့။ ဒီ့ထက်လည်း နောက်ကျ ပြုနိုင်ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဟာ ဘယ်အရွယ်ကစပြီး တဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့သလဲ ၊ ဘယ်အရွယ်မှာ စိတ်ကစားဖြစ်ခဲ့သလဲ ၊ ရည်းစားဦးကို ဘယ်အရွယ်မှာ ထားဖြစ်ခဲ့သလဲ ၊ ဘာတွေနားမလည်လို့ ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေ ကြုံရတယ်ဆိုတာ သားသမီးကို မဆုံးမခင် မိမိကိုယ်ကို သတိပေးရမှာပါ။
အခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်မျက်စိထဲ နို့နံ့မစင်သေးဘူးထင်နေတဲ့ လူပျို ၊ အပျိုဖော်ဝင်စ ဆယ်ကျော်သက်သားသမီးတွေကို ဒါနင့်အရာလား ၊ ဒီလိုတွဲစရာလား ၊ တော်တော်ထနေလား စတဲ့ သဘာဝကို ဖီဆန်တဲ့စကားတွေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ စူးစမ်းစမ်းသပ်ချင်စိတ် ၊ သဘာဝအရ စိတ်ဝင်စားချင်တဲ့အသိတွေကို ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေဟာ မိဘကို ကာပြန်ဖို့ မနိုင်သေးတဲ့အရွယ်မို့ မိဘရှေ့ မိဘစကား နားထောင်သလိုနေမှာဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်ကပိတ်ပင်လေ သူက ပိုစိတ်ဝင်စားပြီး ဘာကြောင့်ဒီလိုပိတ်ပင်နေပါလိမ့် ၊ ဘယ်လိုမျိုးပါလိမ့်ဆိုပြီး စူးစမ်း စမ်းသပ်ချင်စိတ်တွေ ပိုဝင်လာပါတော့တယ်။
ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်လာတော့ မိဘရှေ့မှာ မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်လိုနေပြီး ကွယ်ရာမှာ မိဘတားတဲ့အရာတွေ ပိုလုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့ဆို သောက်ဖြစ်တာ ၊ အရက်ဘီယာမသောက်နဲ့ဆို စမ်းရင်းသောက်ဖြစ်သွားတာ ၊ ဂိမ်းမဆော့နဲ့ဆို ဂိမ်းဆိုင်ရောက်နေတာ ၊ ရည်းစားမထားနဲ့ဆို ရည်းစားရနေတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မိဘက သားသမီးဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ သူ့လွယ်အိတ်ထဲ ၊ သူ့စာအုပ်တွေကြား ၊ သူ့ဗီရို အံဆွဲတွေကြား ၊ ခေါင်းအုံးအောက် စသဖြင့်မှာ မွှေနှောက်ရှာပြီး တွေ့တယ်ဆိုတာနဲ့ သားသမီးကို ဆူဆဲအော်ဟစ် ရိုက်နှက် ဆုံးမတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ သားသမီးတွေဟာ လုပ်နေတာတွေ လုံးဝရပ်တန်းက ရပ်သွားသလားနော်။ သေချာပါတယ်။ နောင်အခါတွေများမှာတော့ ပိပိရိရိသေသေသပ်သပ် ခိုးလုပ်လာတော့မှာပါ။
တကယ်ဆို မလုပ်နဲ့လို့ ယတိပြတ် ပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ထက် ဘာကြောင့် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အသိ သားသမီးကို သင်ပြပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင် ဘာဖြစ်မယ် ၊ ဘာတွေကတော့ ရှောင်ရန် ၊ ဘာတွေကတော့ဆောင်ရန် ဆိုတာတွေကို မိမိသားသမီး ဟိုးလသားအရွယ်ကတည်းက သင်ပြပြောဆိုကျင့်လုပ်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကစားတဲ့အရွယ်မှာလည်း ကစားတဲ့အရွယ်အလျောက် သိသင့်တဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေ ၊ ကျောင်းနေအရွယ်မှာလည်း သိသင့်တဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေ ၊ အရွယ်ရောက်လာရင်လည်း သူ့အရွယ်အလျောက် ပြောင်းလဲသိသင့်တဲ့ လောကအမြင်လေးတွေနဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေကို သူ့ကို ချိုချိုသာသာ ၊ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သင်ပြပြောဆိုတာမျိုး ၊ ဆွေးနွေးပြောဆိုကြည့်တာမျိုးတွေ လုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် အရွယ်ရောက်မှ ဒါမလုပ်ရ ၊ ဒီလူနဲ့မပေါင်းရ ၊ ဒီလူနဲ့မတွဲရ ၊ ရည်းစားမထားရ ဆိုတဲ့ ယတိပြတ်စကားလုံးတွေ သုံးစရာမလိုတော့ဘူးလေ။
ကလေးကို ငယ်စဉ်ကတည်းကစလို့ ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့အသိ ထည့်ပေးပြီးထားမို့ တပွဲထိုးအသိတွေ ဇွတ်ထည့်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကလေးဟာ အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အမိန့်ဆိုတာတွေကို ဖီဆန်ချင်လာတယ်။ ဒါဟာ သဘာဝပါ။ သူလသားအရွယ်ကတည်းက ဒါလုပ်ဆိုတာပဲ လုပ်ခဲ့ရတယ် ၊ ဒါမလုပ်နဲ့ဆို လုပ်ခွင့်မရှိတော့ လုပ်ကိုင်လာနိုင်တဲ့ အရွယ်ကလေးရောက်လာတာနဲ့ ကွယ်ရာမှာ ခိုးလုပ်တတ်လာတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သဘာဝပါပဲ။ သဘာဝကို လွန်ဆန်လို့တော့မရဘူးပေါ့။ အခု ငါပြောတာနားထောင် ၊ ငါမလုပ်နဲ့ဆိုတာကို မလုပ်နဲ့ ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘတွေဟာ တကယ်ပဲ မိဘစကားကို ဤသည်မရွေး မြေဝယ်ကျနားထောင်ခဲ့သူတွေဟုတ်ရဲ့လား ၊ တကြိမ်တခါမှ မိဘကွယ်ရာမှာ ခိုးမလုပ်ဖူးဘူးလား ၊ မိဘကို မလိမ်ညာခဲ့ဖူးဘူးလား။ ကိုယ့်တုန်းက လုပ်ခဲ့တာတွေ ကိုယ့်သားသမီးကို မလုပ်ရလို့ ပိတ်ပင်မယ်ဆိုရင် သူဟာရော ကိုယ့်လို ကွယ်ရာမှ ခိုးမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့လား။
မိဘနေရာရောက်လာခဲ့သူတွေဟာ လောကဓံကို ခံခဲ့ရသူတွေ ၊ အလှည့်အပြောင်း အချိုးအကွေ့ဆိုတာတွေ အနည်းနဲ့အများ ကြုံခဲ့ဖူးသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုလှည့်စား အမြတ်ထုတ်တတ်တဲ့သူတွေကိုလည်း ကြုံခဲ့ဖူးမယ် ၊ ပေါင်းထိုက်သူ နဲ့ မပေါင်းထိုက်သူတွေဆိုတာကိုလည်း သင်ယူလာခဲ့မယ် ၊ အသည်းကွဲဝေဒနာကိုလည်း ခံစားဖူးခဲ့မယ် ၊ မာယာဆိုတာကိုလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးမယ် စသဖြင့် လူ့လောကမှာ ကြုံတွေရမယ့် သင်ခန်းစာတွေကို နဖူးတွေ့ ၊ ဒူးတွေ့ အနည်းနဲ့အများ ကြုံခဲ့ဖူးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ များများကြုံလေ သမ္ဘာရင့်လေ ၊ ဒါတွေက သင်ယူနိုင်ခဲ့လေ အသိဥာဏ်ရင့်ကျက်လာလေ ၊ အန္တရာယ်ကို ကြိုမြင်လို့ ရှောင်ရှားတတ်လာလေဖြစ်မှာပါ။ ဒီကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကို သားသမီးကို ဝေမျှပါ။ အပွင့်လင်းဆုံးမပြောချင်ရင်တောင် ကောင်းသောအကြောင်းအရာဖြင့် သွယ်ဝိုက်ပြီး အဖေ့တုန်းက ၊ အမေ့တုန်းက ဘယ်လိုကြုံခဲ့ရပြီး ဒီလိုသင်ခန်းစာရခဲ့လို့ ငါ့သား ၊ ငါ့သမီးကို ဒီလိုမခံစားစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ပြောတာလို့ သင်ပေးပါ။
လူဆိုတာ ပုံပြင်တွေ ၊ ဇတ်လမ်းတွေထက် ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ပုံပြင် ၊ ဇတ်လမ်းတွေ ပြောပြပြီးတားတာထက် ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ချပြပြီး သင်ပြပေးနိုင်ရင် သင်တဲ့သူအတွက် ပိုထိရောက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီဖြစ်ရပ်မှန်ဇတ်လမ်းဟာ ကိုယ့်ကို မေတ္တာ ၊ စေတနာကြီးစွာထားပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် အတွေ့အကြုံတွေဆို သူတို့ခေါင်းထဲမှာ စကားလုံးတွေရိုက်သွင်းထားသလို မှတ်မိနေမှာပါ။ ဒါဟာ မလုပ်ရ ၊ မကိုင်ရဆိုတဲ့ အမိန့်တွေပေးပြီးတားတာထက် ပိုအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။
ပညာသင်တဲ့အရွယ် ပညာကိုပဲ အလေးထားရမယ်။ စိတ်ကစားပြီး ရည်းစားမထားရဘူးဆိုတာကို ရည်းစားမထားရ ၊ ထားရင်အသိပဲလို့ ဆိုဆုံးမတာထက် ရည်းစားထားရင် ဒီဘက်စိတ်ရောက်ပြီး ပညာဘက်မှာ ပေါ့သွားမယ် ၊ ဒါဆို သူငယ်ငယ်ကဖြစ်ချင်တဲ့ မြင့်မားတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းသွားပြီ။ ရည်းစားစောစောထားလို့ ကျောင်းစာမှာ အာရုံလျော့သွားတဲ့သူဟာ စာကြိုးစားမှုလျော့လာမယ် ၊ ဒီအခါ စာမေးပွဲအမှတ်တွေ လျော့လာပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့လိုင်း ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဝေးသွားမယ်။
ရည်းစားထားပြီး စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ လုပ်မိတဲ့ အဆုံးစွန်မှာ အိမ်ထောင်စောစောကျနိုင်တယ်။ အရွယ်မတိုင်ဘဲ အိမ်ထောင့်တာဝန်ထမ်းရမယ်။ သားသမီးတာဝန်ထမ်းရမယ်။ သူများတွေ အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းတက် ၊ အလုပ်ကောင်းကောင်းရပြီး မြင့်မားတဲ့ဘဝအခြေအနေ ရောက်နေချိန်မှာ ကိုယ်ဟာ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သားတွဲလဲ ၊ သမီးတွဲလဲ အိမ်ထောင့်တာဝန်တွေ ထမ်းရမယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်မကောင်းရင် တခုလပ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ် စသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ၊ အလှမ်းမဝေးတဲ့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တွေထဲကနေထုတ်ပြီး သားသမီးနားလည်အောင် ချိုချိုသာသာ ၊ ဆွေးဆွေးနွေးနွေး သွန်သင်ပြရမှာပါ။
ဆယ်တန်းအထိ ရည်းစားမထားဘဲနေဦးတော့ တက္ကသိုလ်ရောက်ရင် အများစုက ရည်းစားထားဖြစ်လာကြပါတယ်။ ခေတ်ကာလကြီးက ရည်းစားထားတာနဲ့ ရည်းစားနဲ့ အတူအိပ်ရမလို ဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးဆိုတော့ မအိပ်နဲ့သွားတားလို့ သူအိပ်နေရင်လည်း ကိုယ်သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့်လည်း တက္ကသိုလ်ထဲ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ အမြင်မတော်နေထိုင်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ ၊ ပန်းခြံထဲ ဟိုတယ်ထဲ လူမြင်ကွင်းတွေမှာ အကွယ်တခုနောက် စိတ်ကွယ်ရာလိုက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ အွန်လိုင်းပေါ်တက်ပြီး ပျံ့နှံ့လာတာ သက်သေမဟုတ်လား။ သူတို့မိဘတွေက သူတို့ကို ကျောင်းသွားပြီး စာလေ့လာနေတယ်လို့ပဲ ထင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အသိတရားမရှိတဲ့ကလေးတွေဟာ စိတ်ကို မထိန်းနိုင်ကြတဲ့အတွက် စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ မလုပ်သင့်တာတွေ လိုက်လုပ်မိကြတယ်။ သူတို့ကို အမိန့်တွေပေးဖို့ထက် အသိတရားတွေ ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ဖြစ်သင့်တာက နှုတ်ခမ်းမွှေးရေးရေး ထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့သားကို ၊ အပျိုဖော်ဝင်လာတဲ့သမီးကို အဲဒီအရွယ်ကစလို့ လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေဆိုတာကို အသိပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဘာမှသိဦးမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ မသိလို့ကို အသိသွင်းပေးခိုင်းတာပါ။ မသိလို့မှားပြီး စိတ်နောက်ကိုယ်ပါစမ်းသပ်ရင်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ကလေးရတာ ၊ ကလေးဖျက်ချတာတွေထက်စာရင် လိင်ကိစ္စဆိုတာဘာ ၊ လိင်ကျူးလွန်တယ်ဆိုတာဘာ ၊ ဘယ်နေရာတွေဟာ တစိမ်းမထိတွေ့သင့်တာ ၊ ဘာတွေကတော့မလုပ်သင့်တာ ၊ ဘယ်လိုတွေကြိုတားထားသင့်တာ စသဖြင့်ကို ကိုယ်တိုင်ပြောမထွက်ရင် စာအုပ်စာပေတွေ ဝယ်ပေးထားပါ။ သူစိတ်ပါဝင်စားလာတဲ့တချိန်မှာ ဖတ်ရှုပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကိုသိလာပြီး ရွယ်တူချင်းမှာ အမှားနည်းသူတစ်ဦး ဖြစ်လာမှာပါ။
သဘာဝအရ လိင်ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားလာပြီး စမ်းသပ်လိုလာကြတဲ့ မြီးကောင်ပေါက်တွေ မဟုတ်တာတွေ မလုပ်မိအောင် လိင်အသိရှိပြီး သတိနဲ့နေထိုင်တတ်အောင် ဟိုးအရင်ကတည်းက ရေသားခဲ့တဲ့ Burmese Hearts ကပို့စ်တွေရှိပါတယ်။ ဘယ်စာအုပ် ဘယ်မှာဝယ်ရမှန်းမသိရင် ဒီပို့စ်တွေကို Print ထုတ်ထားပြီး မိမိသားသမီးကို လိင်အသိပေးနိုင်ပါပြီ။ မိဘနဲ့သားသမီးကြား မျက်နှာပူစရာတွေ ဖြစ်မနေရအောင် သားဆိုအဖေကပေးလို့ သမီးကိုအမေကပေးပါ။ ဖတဆိုး ၊ မိတဆိုးတွေကျတော့ အုပ်ထိန်းသူကပဲ ပေးရမှာပေါ့နော်။ အဲဒီလင့်ခ်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အရောင်ကွဲနေတဲ့ အောက်ကစာသားတွေအပေါ် ကီးဘုတ်က Ctrl နှိပ်ထားပြီး Left ကလစ်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလင့်ခ်တွေမှာပေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို တော်၏ မတော်၏ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုပြီး အရွယ်ရောက်နေတဲ့ မိမိသားသမီးတွေကို မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်အောင် အသိပေးနိုင်ပါပြီ။
မိန်းကလေးများ၏ ဓမ္မတာ သဘာဝ ၊ မိသားစုဦးရေ ကန့်သတ်ခြင်းသည် ကလေးဖျက်ချခိုင်းခြင်းမဟုတ် ၊ သန္ဓေတားခြင်း (အပိုင်း-၁) ၊ သန္ဓေတားခြင်း (အပိုင်း-၂) ၊ ရက်ရှောင်၍ အတူနေနည်း အပိုင်း(၁) ၊ ရက်ရှောင်၍ အတူနေနည်း အပိုင်း(၂) (ဒါကတော့ တကြိမ်တခါသာမှားတတ်တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် တခါသုံးဆေးတွေ မိန်းကလေးကအကြိမ်ကြိမ်သုံးပြီး ကျန်းမာရေးမထိခိုက်ရအောင် ရည်ရွယ်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီပုံမှန်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေသာ ဒီနည်းက အသုံးပြုလို့ရတာပါ။) ပဋိသန္ဓေတည်ခြင်း လက္ခဏာများ အပိုင်း(၁) ၊ ပဋိသန္ဓေတည်ခြင်း လက္ခဏာများ အပိုင်း(၂) ၊ မွေးဖွားပေးလိုက်ရုံနှင့် မပြီးသည့် မိဘတာဝန် ၊ ရင်သွေးအတွက် အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း
အရွယ်ရောက်လာတဲ့သားသမီးကို လိင်အသိပေးရုံနဲ့ သိသင့်တာတွေအကုန်လုံး သင်ပေးလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ရှောင်ရန်ဆိုတာတွေကို သတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး ဆောင်ရန်ဆိုတာတွေကိုလည်း သင်ပေးရဦးမှာပါ။ သားသမီးဟာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ မစဉ်းစားသေးပေမယ့် အရွယ်ရောက်တဲ့သားသမီးမို့ အိမ်ထောင့်တာဝန်ဆိုတာ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး ချစ်နေရုံနဲ့ မပြီးဘူးလို့ သိနားလည်ဖို့လည်း လိုသေးတယ်လေ။
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုး ဆိုတာနဲ့ ယောက်ျားကောင်းပီသသူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကိုလည်း ပြောပြသင်ပေးရဦးမယ်။ လုံးဝရှေးရိုးကြီးအတိုင်း လိုက်လုပ်လို့မရတဲ့ ခေတ်အခြေအနေမို့ ခေတ်နဲ့လျော်ညီစွာ သင်ပေးတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ အောက်မှာ လင့်ခ်ကလေးတွေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရောင်ကွဲနေတဲ့ အောက်ကစာသားတွေအပေါ် ကီးဘုတ်က Ctrl နှိပ်ထားပြီး Left ကလစ်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလင့်ခ်တွေမှာပေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို တော်၏ မတော်၏ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုပြီး အရွယ်ရောက်နေတဲ့ မိမိသားသမီးတွေကို မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်အောင် အသိပေးနိုင်ပါပြီ။
အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်း ၊ တူနှစ်ကိုယ်တိုင်းပြည် ၊ ပျိုမေတို့ကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတတ်သူတို့ရဲ့ အလေ့အကျင့် ၊ ဟန်ဆောင်မှုဟာ ကြောက်စရာကောင်းတယ် ၊ အိုးချင်းထားတော့ အိုးချင်းထိ ၊ ကြိုးချင်းထားတော့ ကြိုးချင်းငြိ ၊ ရှေ့သို့မဆက်ခင် အနောက်သို့ မျှော်တွေးပါ ၊ စိတ်ကစားခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကွာခြားပုံ ၊ အချစ်စစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် ၊ အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ် ၊ သဝန်တိုစိတ် ဘယ်ကလာ ၊ စွန့်သွားသူရဲ့နောက်ကျော ပြုံးပြနိုင်ပ့ါမလား ၊ အချစ်ကို ကစားတတ်သူများ၏ နိဂုံး ၊ မေတ္တာတရားဖြင့် ချစ်ခြင်းမှသည် သစ္စာတရားဖြင့် ချစ်ခြင်းသို့ ၊ ခင်ပွန်းကောင်း ၊ ဖခင်ကောင်းကိုမှ လက်တွဲလိုသူ အမျိုးသမီးများအတွက် ၊ စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ကန်သင်း ၊ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ သော့ချက် ၊ ခံစားမှုချင်း ထပ်တူညီလာဖို့ ကိုယ်ချင်းစာ နွေးထွေးမှုပေးဖို့လိုတယ်လေ
မိန်းကလေးက အိမ်ထောင်ရှင်မတာဝန်ကို သိတတ်ကျေပွန်ပြီး ယောက်ျားလေးက အိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန်ကို သိတတ်ကျေပွန်မယ်ဆိုရင် (အိမ်ထောင်ဖက်လည်း အရွေးမမှားခဲ့ရင်) ဒီအိမ်ထောင်ဟာ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်နေမှာပါ။ အခုခေတ်က အရွယ်ရောက်သူတွေချစ်ကြိုက်ရင် အတူအိပ်မှ ခေတ်မီတယ် ထင်နေကြတဲ့ခေတ်မို့လို့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ချစ်နေရုံ ၊ အတူအိပ်ရုံနဲ့ မပြီးဘဲ တကယ့်ကို ရှုပ်ပြီးတာဝန်များမြောင်လှတဲ့ အချစ်ရေးဖြည့်စွက်ထားတဲ့ လူမှုရေး ၊ မျိုးဆက်တွေပေါ်လာမယ့် ဆက်ဆံရေးဆိုတာကို ခေတ်လူငယ်တွေ သိဖို့လိုတယ်လေ။ ဒီတာဝန်တွေကို ကြိုသိထားပါမှ တာဝန်ယူတတ်မှာပါ။ တာဝန်မယူနိုင်တဲ့သူကိုလည်း ကြိုရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂါတ် တောက်ပထွန်းလင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအနာဂါတ်ကို ဦးဆောင်မယ့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေဟာ ပေါ့ပေါ့သွမ်းသွမ်းတွေးမြင် လုပ်ကိုင်တတ်သူတွေမဖြစ်သင့်ဘူး။ တာဝန်သိပြီး တာဝန်ယူတတ်သူတွေဖြစ်ရမယ်။ အနည်းဆုံး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူနိုင်ရမယ် ၊ မိသားစုတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်။ မျိုးဆက်တွေရဲ့တာဝန်လည်း ယူနိုင်ရမယ်။ ဒီကတဆင့်မှ လူမှုဝန်းကျင်ကတာဝန်နဲ့ နိုင်ငံ့တာဝန်ဆိုတဲ့ ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ad%e1%80%b3-%e1%81%8a-%e1%80%a1%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%9d%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%85-%e1%80%9e-2/feed/0စိတ်ကစားခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကွာခြားပုံ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9/#respond Thu, 10 Dec 2015 11:05:12 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=22417
သစ်ရွက်လှုပ်တောင် ရင်ခုန်တတ်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့ ဒီအရွယ်ဖြတ်သန်းဖူးသူတိုင်း စိတ်ကစားဖူးတာမို့ စိတ်မကစားခဲ့ဖူးဘူးပြောတဲ့သူဟာ ညာပြောတာပါပဲ။ စိတ်ကစားခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာနဲ့ လုံးဝ စိတ်မကစားဖူးတာ ကွဲပြားတယ်လေ။ စိတ်ကစားတယ်ဆိုတာဘာလဲ လွယ်လွယ်နဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင် တဘက်လိင်အပေါ် သဘောကျနှစ်ခြိုက်တဲ့စိတ် ၊ သူ့အပေါ် သာယာတဲ့စိတ်တွေ ဝင်လာတယ်လေ။ သူ့ကို သဘောကျစိတ်တွေဝင်နေတော့ သူ့ကိုမြင်ရင် ရင်ခုန်တာ ၊ သူ့ကိုပဲ မြင်ချင်နေတာ ၊ သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆို (အချိန်ကာလတခုတိုင်) အမှတ်တရ သိမ်းထားမိနေတာ စသဖြင့်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာယာမှုတွေမှာ အရင်နဲ့မတူတဲ့ ခံစားချက် ၊ တခြားသူတွေနဲ့ မတူတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ပေါ်ခံစားလာတာမျိုးပေါ့။
စိတ်ကစားတဲ့အရွယ်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပဲလို့ ထင်ရင်မှားပါတယ်။ မိမိစိတ်ကို မိမိမထိန်းသိမ်းနိုင်သေးတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် ရင့်ကျက်တဲ့ခံစားမှုနဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုး မကိန်းအောင်းသေးတာမို့ ဟိုလူ့မြင် စိတ်ဝင်စားလိုက် ၊ ဒီလူနဲ့အနေများရင် စိတ်ယိမ်းယိုင်လိုက်နဲ့ စိတ်ကစားတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ စိတ်ကစားတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့နောက်မှာ မရင့်ကျက်မှုတွေက ပါဝင်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်သာယာမှုနောက် တကောက်ကောက် လိုက်ပါတတ်သူတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို စိတ်မတည်မငြိမ်နဲ့ စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ ခံစားတတ်ကြပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အများစုဟာ အတန်းထဲမှာသော်လည်းကောင်း ၊ ကျောင်းထဲမှာသော်လည်းကောင်း ၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာသော်လည်းကောင်း မိမိကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်က မိမိစိတ်ကို လှုပ်ရှားစေနိုင်တဲ့ တဘက်လိင်အပေါ် စိတ်ကစားတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှု မရင့်ကျက်သေးသူတွေမှ စိတ်ကစားတတ်ကြတာဆိုတော့ သူတို့စိတ်ကစားတဲ့သူတွေဟာ ပျိုပျို အိုအို အကုန်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ကစားတတ်တဲ့ မနူးမနပ်လေးတွေကို စားနေကျကြောင်ပါးတွေက တမင်စိတ်ကစားအောင်လုပ် ၊ ပြီးရင်သိမ်းသွင်းပြီး သူတို့လိုချင်ရာ အရယူတတ်ကြတယ်။ တဖက် မနူးမနပ်စိတ်ကလေးနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမိသူက စိတ်နောက်ကိုယ်ပါခံစားရင် သူတို့လှည့်ကွက်ထဲ သက်ဆင်းရပြီပေါ့။
စိတ်ကစားတယ်ဆိုတာ တခါတလေကျတော့လည်း နီးစပ်မှုအရသော်လည်းကောင်း ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အပြောင်းအလဲအရသော်လည်းကောင်း ၊ အားကိုးလိုတဲ့အချိန်မှာသော်လည်းကောင်း ၊ အထီးကျန်စိတ်အားငယ်နေချိန်မှာသော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ အနေနီးလို့စိတ်နီးပြီး တွဲဖြစ်သွားတာမျိုး ၊ ခရီးသွားလာရင်း အတွဲလေးတွေပါလာတာမျိုး ၊ သင်္ကြန်လေးငါးရက်အတွင်းမှာ ဇတ်လမ်းလေးတွေ ဖြစ်သွားတာမျိုး ၊ ကိုယ်လိုအပ်နေချိန်မှာ ပေါ်လာပြီး ကိုယ့်ကိုအဖော်လုပ်ပေးသူ ၊ ကူညီပေးတတ်တဲ့သူကိုလည်း အားကိုးစိတ်ကလေးနဲ့ တွယ်ငြိသွားပြန်ရော။ ဒီလိုငြိတွယ်လာတဲ့စိတ်တွေဟာ လတ်တလောဖြစ်ချိန်ကလေးမှာ အချစ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ ဆင်တူယိုးမှား တူနေတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကွာခြားချက်ကြီးကတော့ အချိန်ခြားနားချက်ကြီးပါပဲ။
စိတ်ကစားရုံပဲ ငြိတွယ်မိသူတွေက ကွယ်တာနဲ့မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ၊ အနေဝေးရင်သွေးအေး ၊ ကွယ်တာနဲ့ဖောက်ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဝေးသွားလို့ နေမထိထိုင်မသာ ခံစားရလှ အလွန်ဆုံး လပိုင်း ၊ နှစ်ပိုင်းလောက်ပါပဲ။ ပေါ့ပေါ့လေးခံစားလေ မြန်မြန်လေးမေ့ပျောက်လေ ၊ ခံစားချက်တွေတိမ်လေ လွယ်လွယ်လေးမေ့ပျောက်လေပါပဲ။ စိတ်ကစားရုံကစတဲ့ခံစားမှု နက်ရှိုင်းလာလေ အချစ်တစ်ခုလို ပုံစံပြောင်းသွားလေပါ။ ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေးနက်တဲ့စိတ်ထား ၊ ရေရှည်အတူလက်တွဲလိုမှု ၊ နားလည်မှုပေးနိုင်ခြင်း ၊ သည်းညည်းခံနိုင်ခြင်းတွေဆိုတာ အချိန်ကြာလေ ထုတည်မြင့်မားလာလေ သံယောဇဉ်တွေ ရစ်ပတ်လာလေပဲပေါ့။
စိတ်ကစားရင်းချစ်ကြိုက်ရာက တအိုးတအိမ် ထူထောင်သွားကြတဲ့ စုံတွဲတွေရှိတယ်။ တကယ်အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေက ဘဝကိုရိုးမြေကျ ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ မိသားစုပျော်ပျော်ပါးပါး ပေါင်းသင်းနေကြတာလည်း တွေ့ဖူးတယ်။ စိတ်ကစားရင်း ဆုံးဖြတ်ချက်မှားခဲ့လို့ ဘဝရေတိမ်နစ်သွားရသူတွေလည်း တွေ့ဖူးတယ်။ ကျွန်မ အတန်းဖော်တွေထဲက တချို့ဟာ (၁၀)တန်းမတိုင်မီ ခိုးရာလိုက်ပြေးခဲ့သူတွေလည်း တွေ့ဖူးတယ်။ (၁၀)နောက်ဆုံးနေ့ ခိုးရာလိုက်ပြေးသူနဲ့ တက္ကသိုလ်မတက်ခင် လိုက်ပြေးသွားသူ ၊ ဘွဲ့မရခင် အိမ်ထောင်ကျသွားသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒီအရွယ်က ကျင်လည်ရာအသိုင်းအဝန်းကျဉ်းမြောင်းတော့ ရွယ်တူတွေ ၊ နီးစပ်ရာတွေနဲ့ ပါသွားခဲ့တာပါ။ သူတို့ထဲကမှ အိမ်ထောင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ မြဲတဲ့သူဆိုလို့ နှစ်ဦးတည်း တွေ့ဖူးတယ်။ အတန်းဖော်နဲ့ လိုက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းမနှစ်ဦးလေ။ သိပ်မရင်းခဲ့ပေမယ့် ဆရာကန်တော့ပွဲမှာ ပြန်ဆုံတော့ ဘဝအခြေအနေချင်း ကွာခြားသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မတို့တွေ အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့တွေ မိဘရင်ခွင်မှာ အေးအေးလူလူ ပညာဆုံးခန်းတိုင် ဆက်သင်နေနိုင်တဲ့အရွယ်မှာ သူတို့ကတော့ အိမ်ထောင်ဘက်ရင်ခွင်မှာ မိဘအသိုင်းအဝန်း အငြိုအငြင်ခံပြိး ဘဝကို ခက်ခဲစွာ ရုန်းကန်ခဲ့ကြရတယ်။ အဲဒီမှာ အချစ်စစ်နဲ့ စိတ်ကစားတာ ကွာသွားတာပဲ။
တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေကျတော့ ဆင်းရဲဒဏ် ၊ ချမ်းသာဒဏ်နဲ့ လောကဓံဆိုတာကို ခံနိုင်ကြတယ်။ အချစ်စစ်ဆိုတာ လောကဓံကြောင့် ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမှမဟုတ်တာ။ အစမ်းသပ်ခံနိုင်တယ်။ စိတ်ကစားခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်ရေးခြေလှမ်းကျွံခဲ့သူတွေကျတော့ ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး။ ဆင်းရဲဒဏ် ၊ ချမ်းသာဒဏ်နဲ့ လောကဓံဆိုတာကို မပြောနဲ့။ တစ်ဦးဒဏ်ကိုတောင် တစ်ဦးက သည်းမခံနိုင်ကြဘူး။ ခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုတာလည်းမတွေး ၊ လောကဓံကို နှစ်ယောက်လက်တွဲလို့ ကြံ့ကြံ့ခံမယ်ဆိုတာလည်းမတွေးဘူး။ အိမ်ထောင်ဖက်ထက် သာသူတစ်ဦးဦးများ အနားမှာရှိကြည့် အနေနီးစပ်မှုနဲ့ ပါသွားရော။ ဒါတွေက စိတ်ကစားတဲ့ခံစားချက်ကို အချစ်လို့ထင်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်တတ်တာတွေပေါ့။ နှစ်ယောက်စလုံးက အချစ်စစ်နဲ့ လက်တွဲခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ရင် အကြောင်းကြောင်းနဲ့ ကွဲကြပြဲကြ ၊ စိတ်ဒဏ်ရာတွေရကြပေါ့။
ကျွန်မဟာ အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာ ရပ်တည်နေတာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်ရပ်တည်နေတဲ့နေရာကို ကျေနပ်ပြီး အချိန်နဲ့အမျှ ဆက်လှမ်းနေသူပါ။ လှမ်းနေသမျှ ခရီးရောက်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်တယ်လေ။ State ကျောင်းတုန်းက ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်တွေ့တဲ့အခါ သူတို့နဲ့အခြေအနေတွေ ခြားနားသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကို သူတို့က စိတ်ဝင်တစားမေးကြတယ်။ ဘယ်လိုကဘယ်လို ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်သွားတာလဲတဲ့။ ပြောရင်အရှည်ကြီးမို့ သူတို့နားလည်နိုင်မယ့်တခွန်းတည်း ပြောဖြစ်တယ်။ ငါက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်မပြုခဲ့လို့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး ရောက်နေတာပါလို့။ သူတို့တွေဟာ နုံချာတဲ့အခြေအနေလို့ ကျွန်မ မဆိုလိုဘူးနော်။ ပြည့်စုံသူတွေလည်းရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်းအောင်ပြောရရင် ရေအိုင်ထဲကငါးနဲ့ သမုဒ္ဒရာထဲကငါး ကျင်လည်ရာကွာသွားသလိုပေါ့။
ကျွန်မရေးတဲ့စာတွေ အထူးသဖြင့် အချစ်ရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ (Relationship) ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်တဲ့သူတွေထဲမှာ State ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူအရွယ်တွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ၊ အပျို ၊ လူပျိုတွေပါမှာပါ။ သူတို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီပို့စ်ရေးဖြစ်တာပဲလေ။ ဆယ်ကျော်သက်အသိုင်းအဝိုင်း ဝင်ဆန့်မှုဆိုတာဟာ သုံးဆယ်အရွယ် အသိုင်းအဝန်း ဝင်ဆန့်မှုနဲ့ ကွာခြားလှပါတယ်။ ဗဟုသုတ ၊ အတတ်ပညာ ၊ အပေါင်းအသင်း ၊ သတင်းအချက်အလက် ၊ အတွေ့အကြုံ ဆိုတာတွေဟာလည်း အရွယ်ရလာလေ တိုးတက်ပြည့်စုံလာလေပါ။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အချိန်မှာ စိတ်ကစားပြီး ကိုယ်ကျင်လည်ရာဝန်းကျင်က ကိုယ်အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မြင်ရာနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆို မမြဲရင် တခုလပ် ၊ နှစ်ခုလပ် ဖြစ်မှာပေါ့။ မြဲရင်လည်း ဒီ့ထက်ပိုသာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ယောက်ျားကောင်းနဲ့ ဖူးစာဆုံခွင့် ဒီဘဝမှာဝေးသွားပြီလေ။ ရရာနဲ့ ကျေနပ်လိုက်ရတဲ့သဘောပေါ့။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သာ အချစ်စစ်ရင် ဘယ်ဘဝမှာပဲ ရပ်တည်ရ ၊ ရပ်တည်ရ ဒီအိမ်ထောင် ၊ ဒီမိသားစုလေးရရှိတာ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်တယ်။ တကယ်မချစ်ခဲ့ဘဲ စိတ်ကစားတဲ့ကာလအတွင်း ယူခဲ့ရင်သာ ရနေတဲ့ဘဝကို မကျေနပ် ၊ သူများတွေဘဝကိုအားကျ ဒီ့ထက်တဆင့်တက်လာရင် သူများဘဝတွေလို ရလိုရငြား တအိမ်ထောင်ပြောင်းဖို့ စိတ်တွန်းအားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ သူ့ကို ချစ်မိတယ်လို့ ထင်နေရင် သူ့ကိုချစ်ရေးမဆိုခင် ၊ သူ့အချစ်ကို လက်မခံခင် ငါဟာ စိတ်ကစားနေမိတာလားလို့ ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ဒီလူနဲ့ ဝေးဝေးခွါခွါနေကြည့် ၊ အဆက်အဆံကင်းကင်းနေကြည့် ၊ သူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာ ခရီးထွက်ကြည့်။
လအနည်းငယ်ကနေ နှစ်ပိုင်းအတွင်း ခံစားချက်တွေပါးလျပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ရှိသွားပြီဆိုရင် မီးဝေးလို့ချိတ်အေး ၊ နီးစပ်လို့ စိတ်ကစားမိခဲ့တာပါလို့ အကြံပေးချင်တယ်။ ကျွန်မ စိတ်ကစားတဲ့ ငယ်နုစဉ်အရွယ်တွေတုန်းက ဒီလိုလုပ်ခဲ့ပြီး မိမိ စိတ်ကစားမှုမှန်သမျှ ပယ်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလူ့အကြောင်းတွေးမယ့်အစား ကိုယ်လေ့လာစရာရှိတာတွေ ၊ လုပ်ကိုင်စရာရှိတာတွေကိုပဲ အာရုံစိုက်တယ်။ တကယ်မချစ်ရင် ခံစားချက်တွေ ပါးသွားတာပဲ။ ဒီလိုကာလအတွင်းမှာ သူဟာ အတွဲတွေ့သွားတယ်ဆိုလည်း လွတ်တဲ့ငါးကြီးပြီး ဝမ်းမနည်းနေဘူး။ ဒီကာလအတွင်းမှာတောင် သူဟာ နီးစပ်ရာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် သူလည်း ကိုယ့်ကိုစိတ်ကစားရုံရှိခဲ့လို့ပေါ့။ ဒီလိုလူနဲ့ ရည်းစားမဖြစ်ခင်ကွဲခဲ့တာ ဘယ်လောက်ကံကောင်းလိုက်သလဲ။ ယူပြီးမှ နီးစပ်ရာနဲ့ ဖောက်ပြန်နေရင် မခက်ပေဘူးလား။
တကယ်ချစ်တဲ့သူက လပိုင်း ၊ နှစ်ပိုင်းအတွင်း ကောက်ယူမှာလား။ ချစ်ခွင့်ရဖို့ ၊ လက်ထပ်ခွင့်ရဖို့ ကိုယ့်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်မျှော်နေမှာပေါ့။ သူ့အိမ်ထောင်ဖက်နေရာကို ကိုယ့်အတွက်လို့ စရံသတ်ထားမှာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား။ ဒီတော့ သူကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်မချစ်လည်း တကယ်သိရ ၊ ကိုယ်သူ့ကို ချစ်မချစ်တကယ်သိရ တခါစမ်းသပ်ကြည့်ရုံနဲ့ နှစ်ခုပွဲပြတ်ပြီး အချစ်စစ်ကိုရှာတွေ့မယ်လေ။ ဒါဟာ စိတ်ကစားတဲ့သူနဲ့ တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့အပြုအမူ ကွဲပြားချက်တွေပဲပေါ့။ အပျို ၊ လူပျိုတိုင်းလည်း စိတ်ကစားခြင်းနဲ့ အချစ်စစ် ကွဲကွဲပြားပြားနားလည်လို့ အချစ်စစ်နဲ့တွေ့ဆုံ ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေနော်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9/feed/0အချစ်ကို ကစားတတ်သူများ၏ နိဂုံး http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%80%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-2/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%80%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-2/#respond Wed, 09 Dec 2015 11:10:22 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=22360
အချစ်ကို ကစားတယ်ဆိုတာ ခံစားချက်တွေကို ကစားတာပါ။ ကိုယ်တကယ်မချစ်ဘဲ ချစ်ဟန်ဆောင်တာ ၊ ကိုယ်တကယ်ခံစားလို့မရဘဲ သူတပါးအချစ်နဲ့ ပျော်မွေ့ဖို့ကြိုးစားတာတွေဟာ အချစ်နဲ့ကစားနေတာပါ။ အချစ်နဲ့ကစားနေသူတွေဟာ မာန်တက်နေသူတွေများပါတယ်။ အလှမာန်တက်သူတွေ ၊ ပစ္စည်းမာန်တက်သူတွေစသဖြင့်ပေါ့။ သူတို့တွေဟာ မမြဲတဲ့အရာတွေကို အဟုတ်လုပ် မြဲတယ်ဆိုပြီး တလွဲဂုဏ်မောက်နေသူတွေပါ။
အချစ်နဲ့ကစားတတ်သူတွေဟာ စွံတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ မြာပွေတယ်စကား အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခုကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ စွံတယ်ဆိုတာ ကိုယ်မကြိုက်လည်း ကိုယ့်ကိုကြိုက်သူတွေများနေတာဖြစ်ပြီး မြာပွေတယ်ဆိုတာကတော့ လူတွေအမြင်မှာ ကိုယ်နဲ့ရည်းစားလိုလို ဘာလိုလို (တကယ်လည်းရည်းစားတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်) တွဲတဲ့သူအရေအတွက်များနေတာပါ။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ တန်ဖိုးချင်းက လုံးဝမတူပါဘူး။ ပိုမြင်အောင် ပြောရမယ်ဆို တကယ်စားကောင်းတဲ့ဆိုင်မို့ စားခွင့်ရအောင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် တန်းစီစောင့်နေသူတွေရှိတဲ့ဆိုင်နဲ့ အလကားကျွေးတဲ့နေရာမို့ လူတွေ လူးလားခတ်နေတဲ့နေရာ တန်ဖိုးချင်း တူနိုင်ပါဦးမလား။ လာတဲ့သူတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ချင်းလည်း မတူနိုင်ပါဘူး။
အလကားစားရသူတွေက အလကားစားရတာမို့ အရှုံးမရှိဘူး မြည်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ စမ်းသပ်လိုစိတ်နဲ့ လာစားကြတာဖြစ်ပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် တန်းစီစောင့်နေတဲ့သူတွေကတော့ သူများတွေရဲ့ အပြောကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကိုယ်တိုင်အရသာခံစားသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လာစားခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အရှက်တရား ၊ အကြောက်တရားဆိုတဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်တွေဝန်းရံထားတဲ့ လူ့သိက္ခာရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်လဲတွဲနေသူတွေဟာ ကိုယ့်ကို မြည်းစမ်းချင်တဲ့စိတ် ၊ အလကားရလို့ လာမြည်းတာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ ခံစားကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ ဘယ်လောက် အောက်ကျနောက်ကျနိုင်ပြီး သိက္ခာမဲ့လိုက်သလဲလို့ …. ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမသိက္ခာဟာ ကိုယ်ထည်လဲတွဲသူတွေနဲ့ လဲလိုက်ရတယ်ဆိုတာ အစကကြိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘဝကို သူတို့တွေလက် ပေးမြည်းချင်ပါရဲ့လား။
ယောက်ျားများစွာနဲ့ ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ငွေပေးရင်အအိပ်ခံတဲ့ အမျိုးသမီးတွေပါ။ သူတို့ဟာ ဒီလိုလုပ်ရင်း သူတို့ဝမ်းစာကိုဖြေရှင်းကြတာပါ။ သူတို့ပညာဟာ ယောကျာ်းများများနဲ့ ဆက်ဆံရဖို့နဲ့ နေ့တွက်ဝင်ငွေ ပိုကိုက်ဖို့အရေးဖြစ်ပါတယ်။ နောင်ခါမှ ကျန်းမာရေးထိချင်ထိ ဒီနေ့အတွက်တော့ ယောကျာ်းများများဝင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ခံယူချက်လေ။ ကိုယ်ဟာလည်း ငွေလိုချင်လို့ ခန္ဓာပေးတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားထဲဝင်သွားပြီဆိုရင် မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်လို့ ခေါ်နိုင်ပါသေးရဲ့လား။ ကိုယ်နဲ့တွဲနေသူတိုင်းနဲ့ အိပ်တယ်ဆိုရင်လည်း ငွေမရဘဲအအိပ်ခံတဲ့ဘဝမို့ မိန်းမပျက်တွေထက်တောင် ဈေးပေါနေပါသေးတယ်။
ခန္ဓာပေးမှအချစ်စစ်လို့ အချစ်စမ်းနေတဲ့ ဒီလိုယောကျာ်းတွေနဲ့ပဲ ပတ်သက်နေရတယ်ဆို ကိုယ့်တန်ဖိုး ကိုယ်ပြန်မြှင့်ဖို့ ဒီလိုယောက်ျားတွေနဲ့ မပတ်သက်မိအောင် နေလိုက်ပါ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို အချစ်ဝတ္ထုတွေမဟုတ်တဲ့ ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားရာ ပညာရေးရသ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ ငယ်ရွယ်လေ ပညာရှာသင့်လေ ၊ လေ့လာမှုအားကောင်းလေ ဘဝအဆင့်မြင့်နိုင်လေဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျားတွေနဲ့အိပ်မှ ခေတ်မီတယ်လို့ ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမဈေးကျကျခေတ်ကြီးထဲမှာ ယောကျာ်းတွေနဲ့ လုံးဝမအိပ်ဖူးတဲ့ အပျိုစင်စစ်စစ် ကိုယ့်တန်ဖိုးဟာ ဘယ်လောက်များ တန်ဖိုးကြီးလိုက်သလဲနော်။ ဒီလို ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ အပျိုစင်မိန်းကလေးကို ရတဲ့သူ ကံကောင်းလိုက်လေခြင်း။ ဒါ့အပြင် ဒီမိန်းကလေးဟာ အချစ်စမ်းတဲ့ယောကျာ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်မယ့်အစား ပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေ လေ့လာလိုက်စားနေသူမို့ ဥာဏ်ပညာမြင့်တဲ့ မိန်းကလေးအဖြစ်နဲ့လည်း ရပ်တည်နေဦးမှာလေ။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီလိုမိန်းကလေးတွေကမှ တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး မိန်းမကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်အလှဟာ အလွန်ဆုံးခံလှ နောင်နှစ်သုံးဆယ်ပေါ့။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ထက်မြက်တော်မော်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက် နေရာကောင်းရနိုင်တဲ့ခေတ် ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ကို တကယ်တန်ဖိုးထားချစ်တဲ့သူနဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကို မြည်းစမ်းချင်သူတွေဆိုတာကို လူကဲခတ်အတွေ့အကြုံ ၊ စာအုပ်ထဲက ဗဟုသုတတွေအရ ကွဲကွဲပြားပြား သိနိုင်ပြီလေ။ အစွန်းအထင်းမရှိတဲ့ ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးဟာ တွေးခေါ်မှုအဆင့်အတန်း ၊ သိက္ခာအဆင့်အတန်း မြင့်မားတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တာမို့ သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ တွေးခေါ်မှုအဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် ယောကျာ်းကောင်း ၊ ယောကျာ်းမြတ်တွေကိုပဲ အိမ်ထောင်ဖက်အချစ် ရည်ရွယ်ချစ်ကြိုက်တော့တယ်။ ကျွန်မအကြိုက်ဆုံး စကားစုတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်မအသက်(၁၉)နှစ်လောက်က ဆရာတော် ဦးဇောတိကရေးသားထားခဲ့တဲ့ ဘဝဆိုတဲ့ကျောင်း စာအုပ်ထဲကနေ ဖတ်မှတ်သားထားခဲ့တာ။ “On the long run, you will get what you deserve.” တဲ့။ ရေရှည်မှာ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်ရာကိုပဲ ကိုယ်ရမှာလို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီစကားဟာ တကယ်မှန်ကန်တယ်။ လူဆိုတာ ရေရှည်မှာ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တာကိုပဲ ကိုယ်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့အတွေးအခေါ် ၊ ခံယူချက် ၊ ယုံကြည်မှု ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ၊ ရည်မှန်းချက် စတာတွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုပဲ ရေရှည်ကာလမှာ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေတိုကာလကို ကျွန်မ မဆိုလိုဘူးနော်။ အခုလုပ် ၊ အခုဖြစ် ၊ အခုရလဒ်ထွက်နေတာကို မကြည့်ဘဲ နောင် ဆယ်နှစ်ကျော် ၊ နှစ်နှစ်ဆယ် ၊ နှစ်သုံး ၊ လေးဆယ်ကျော်ဆိုတဲ့ ရေရှည်ကာလမှာ ထွက်လာမယ့် ရလဒ်ကို ကျွန်မဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်မကြည့်ဘဲဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရင် အခုပျော်ကောင်းပျော်မယ်။ ရေရှည်ကာလ ရောက်လာခဲ့ချိန်မှာ စိတ်ဆင်းရဲ ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲဆိုတဲ့ အပူအထွေထွေကို ပိုက်နေရတာကို ဆိုလိုတာ။ အခုမျက်မှောက် ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်ပေမယ့် မလျှော့သောဇွဲနဲ့ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်လို့ ရေရှည်မှာ ခံစားရမယ့် အသီးအပွင့်ရလဒ်ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
အသိုင်းအဝန်းကျဉ်းပြီး အမြင့်မဝင်ဆန့်နိုင်ဘူးလို့ သိမ်ငယ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်မငယ်ဘဝကို ကျွန်မချပြပါ့မယ်။ ကျွန်မအသက်(၁၈)နှစ်မပြည့်ခင် ဆယ်တန်းအောင်စအရွယ်မှာ အလုပ်စလုပ်နေပြီ။ ကျောင်းတုန်းကလည်း ကျောင်းစာနဲ့ အချစ်ရေးမစဉ်းစားဖြစ်ခဲ့သလို ဆယ်တန်းပြီးပေမယ့် စိတ်မလေအောင်လို့ အလုပ်စဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့နောက်ပိုင်းက ကျွန်မအချစ်ရေးကိုတော့ ဒီမှာဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာပဲ အလုပ်ချိန်ပြင်ပ သင်တန်းတွေတက်ပါတယ်။ အလုပ်ပိတ်ရက်တွေနဲ့ မိမိအားချိန်တွေမှာ စာကြည့်တိုက်တွေသွားပြီး စာဖတ်တယ်။ အဲဒီကနေ စာအုပ်တွေငှါးပြီး မိမိသင်တန်းက စာလုပ်ပြီးချိန် နဲ့ မိမိမအိပ်ခင်အချိန်တွေမှာ ဖတ်ရှုပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်မဘဝကို ပညာရေးအရောင်တင်ခဲ့တာပါ။ ဒါတွေဟာ မိမိစိတ်တွေ လေနေချိန်မရအောင် ၊ မဟုတ်တဲ့အရာတွေအပေါ် အာရုံထားပြီး အချိန်တွေမပုပ်ရအောင် မိမိစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်း (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း အကောင်းချည်း မရှိနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဆိုးနည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်နေထိုင်ရမှာပဲလေ။ ဒီအသိုင်းအဝန်းမှာပဲကျင်လည်ပြီး ဒါလူတွေနဲ့ပဲ ပျော်နေရင် ဒီအသိုင်းအဝန်းမှာပဲ ရှေ့ဆက်ဘဝရပ်တည်ရဖို့များနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိပညာအစွမ်းနဲ့ တဆင့်ထက်တဆင့် မြင့်အောင်ကြိုးစားသွားသင့်တယ်။ သူများကိုနင်းပြီးတက်ဖို့ထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိက္ခာရှိရှိ တဆင့်ပြီးတဆင့် မြင့်သထက်မြင့်အောင် တက်သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
ကျွန်မကိုနင်းပြီး တက်သွားခဲ့သူတွေနဲ့လည်း ကျွန်မကြုံဖူးတာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မဘယ်လိုစိတ်ထားသလဲဆိုရင် သြော် … သူတို့မှာ ဒီနေရာကလွဲပြီး ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးထင်လို့ ဒီနေရာလေး ကပ်လုနေကြပါလားလို့မြင်တယ်။ ဘဝဟာ ပြေးလမ်းဆိုရင် ကိုယ့်ကိုတွန်းတိုက်သွားသူတွေကို ပြန်တွန်းတိုက်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ သူတွန်းတိုက်လာနိုင်ချိန်ကို သတိထားပြီး သူတိုက်လာချိန်မှာ သူ့အရှိန်နဲ့သူလဲသွားအောင် အချက်ကျကျ ရှောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလို့ ကိုယ့်ခရီးကိုယ် ဆက်လှမ်းပါ။ သူတွန်းလို့ ကိုယ်တိုက်နေရင် ခြေလှမ်းတွေ ခရီးရောက်နိုင်ပါတော့မလား။
တချို့တွေက ဘဝတဆင့်မြင့်အောင် ကြိုးစားပါဆိုတဲ့စကားကို ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့သူကိုမှ ယူရမယ်လို့ တလွဲတွေးကြတယ်။ ဒါဟာ ဖြတ်လမ်းလိုက်တာပေါ့။ ကျွန်မ အသက်(၂၆)နှစ်လောက်တုန်းက အရမ်းချောတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့ထက် အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်ကြီးတဲ့ လူချမ်းသာတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်သွားတယ်။ အဲဒီလူကလည်း မယားကြီးကိုကွာပြီး ကျွန်မသူငယ်ချင်းကို အတည်တကျ ခမ်းခမ်းနားနား လက်ထပ်ယူခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် မယားကြီးကမွေးတဲ့သမီးနဲ့ သူနဲ့က သက်တူရွယ်တူလိုဖြစ်နေတယ်။ တကယ်တင့်တောင့်တင့်တယ်ယူထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုပေမယ့် လူကြားထဲသွားတဲ့အခါ ကျွန်မသူငယ်ချင်းဟာ သူ့ဘဝအခြေအနေကို ပိုမြင်သထက်မြင်လာတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာပဲနေရနေရ ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ့်ခင်ပွန်းက ဖူးဖူးမှုတ်ချစ်တယ်ဆိုဆို အရွယ်ကွာဟမှုကတော့ အတိုင်းသားကြီးပဲလေ။ မိတ်ဆုံစားပွဲ ၊ ဧည့်ခံပွဲတွေသွားရင် ခင်ပွန်းအသိုင်းအဝန်းက သူမခင်ပွန်းနဲ့ သက်တူရွယ်တူတွေကြားမှာ သူမတစ်ယောက်ပဲ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မယားအဖြစ်ရှိနေတော့ မျက်ဝန်းပေါင်းစုံတွေဒဏ်မခံနိုင်လို့ ခင်ပွန်းအသိုင်းအဝန်းနဲ့ ဝေးရာရှောင်လာတယ်။
သူမအသိုင်းအဝန်းက ဧည့်ခံပွဲတွေမှာလည်း သူမနဲ့သက်တူရွယ်တူတွေအကြား အဖေအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ သူမခင်ပွန်းက သူမအနားမှာရှိနေတာ ၊ ရွယ်တူတွေရဲ့ ခြားနားတဲ့အကြည့်တွေမှာ သူမဒဏ်မခံနိုင်ပြန်တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လင်စုံမယားစုံ ပွဲတက်ရမယ့်ဧည့်ခံပွဲဆိုတာကို ရှောင်လာပြီး အရွယ်ကွာဟမှုကြောင့် စိတ်မချတဲ့ခင်ပွန်းအလိုကျ နေထိုင်ရင်းက စိတ်ကျရောဂါရလာပါတယ်။ သူမမှာ သမီးကလေးတစ်ယောက် ထွန်းကားလာခဲ့တယ်။ ကလေးဟာ မိဘက ဖူးဖူးမှုတ်ချစ် ၊ လိုတရဘဝမှာနေထိုင်ရပေမယ့် ရွယ်တူကလေးမိဘတွေလို အရွယ်မမျှတဲ့ မိဘနှစ်ဦးကြောင့် ရွယ်တူတွေကြား မကြားတကြား ဟားစရာဖြစ်တာကို မကျေနပ်စိတ်တွေ ၊ အလိုမကျစိတ်တွေနဲ့ ကြွတ်ဆတ်ဆတ်လေး မနာမခံဖြစ်လာတယ်။
တကယ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူ ၊ အတည်တကျ လက်ထပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူ ၊ ကိုယ်ကလည်း ချစ်ပါတယ် ၊ နောင်မပူမပင်နဲ့ ပျော်ရမယ့်ဘဝလို့ တွေးထင်ထားသည့်တိုင် ဘာတွေ ဖြစ်လာသလဲနော်။ ကိုယ့်ကို မရိုးသွားခင်ကာလကလေးတခုမှာ ကိုယ်လိုချင်တာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အလှ အငမ်းမရဖြစ်နေတဲ့ဒီလူကြီး ကိုယ့်မလိုတော့လို့ ပစ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်အသိုင်းအဝန်းအလယ် ၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အလယ် ၊ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်လုံစွာ ပျော်ရွှင်နေထိုင်နိုင်ပါ့မလား။
သူ့သားကြီး ၊ မယားကြီးတွေကိုတောင် ပစ်ပယ်ပြီး ကိုယ့်ကိုပတ်သက်နေတဲ့သူဟာ နောင်တချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုပစ်ပယ်ပြီး ကိုယ့်ထက်ချောလှသူတွေနဲ့ မပတ်သက်နိုင်တော့ဘူးလား။ အပေါ်ကအမျိုးသမီးလို တချိန်မှာ ကိုယ်လည်း သူ့လို မခံစားရပေဘူးလား။ မှန်တာပြောသစ္စာပါ။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းဟာ ခုချိန်အထိ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ ဆေးကုနေရတုန်းပါ။ အရင်တုန်းကလို တက်ကြွမှုတွေသူ့မှာမရှိတော့သလို ၊ သူ့အလှပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုတွေလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ အိမ်တွင်းအောင်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆက်ဖြတ်ထားတဲ့သူမဟာ သူမမျှော်လင့်ထားခဲ့သလို ပျော်ရွှင်နေနိုင်ပါရဲ့လား။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လုပ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့ ဟိုးတချိန်တုန်းက သံရုံးဝင်ဖို့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသည်းအသန်လိုနေလို့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ခပ်မြန်မြန်ထွက်လာအောင် သိန်းပေါင်းများစွာသောငွေပေးပြီး ရဲမှူးတစ်ယောက် လက်မှတ်နဲ့ အကပ်ကလေးရဖို့လိုက်ရတဲ့အချိန် အဲဒီရဲမှူးအိမ်ကို ကျွန်မဝင်ထွက်ဖူးတယ်။ ကျွန်မနဲ့ရွယ်တူ သားနဲ့ သမီးငယ်လေးလည်းရှိတဲ့ ဒီရဲမှူးဟာ ခပ်ပြောင်ပြောင်ပဲ သူနဲ့ငြိနေတဲ့ မယားပျော်တစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်မကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မကိစ္စလိုက်လုပ်ပေးမယ်လို့ သူ့မိန်းမကိုပြောပြီး ကျွန်မက သူ့ကိုလာခေါ်ထုတ်စေခဲ့တယ်။ တကယ်က သူ့အပျော်မယားနဲ့ ပလူးလို့ ညစာအတူစားတာကို ငွေရှင်းပေးဖို့ ကျွန်မက သူတို့နဲ့တဝိုင်းတည်း ငွေထုပ်ပိုက် ထိုင်စောင့်ခဲ့ရဖူးတယ်။
ငွေလည်းသူ့လက်ထဲကျွံနေပြီး ကျွန်မလိုချင်တဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သူ့အရှိန်အဝါနဲ့ မြန်မြန်ရအောင် မသတီစရာကောင်းလှတဲ့ သူ့မျက်နှာကို ဟန်လုပ်ပြုံးရယ်ကြည့်နေခဲ့ရပေမယ့် သူ့မိသားစုအစား အတော်ခံပြင်းမိတယ်။ အတော်မျက်နှာပြောင်တိုက်နိုင်တဲ့လူနော်။ နောင်မှာ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းမှု ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ သူလိုလူမျိုးတွေကို ခပ်များများတွေ့ဖူးလာတော့တာပဲ။ တချို့သော ငွေရှိသူတွေဟာ ငွေကြောင့်ပျက်စီးကြပြီး ဂုဏ်ရှိသူတွေဟာ ဂုဏ်ကြောင့်ပျက်စီးကြပါလား။ သြော် … သူတို့မှာ ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတဲ့ အသိဥာဏ် မရှိလို့လေပဲလို့ ကျွန်မကောက်ချက်ချပြီး ဒီလိုအပေါ်ယံ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းမှုတွေကို ကျွန်မ ရှောင်နိုင်သမျှ ရှောင်လာတော့တယ်။
သူတို့တွေကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အလန်းလေးတွေနဲ့ အပျော်ရှာတာပေါ့။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ အပျက်ဘက်ရောက်နေတာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သတိမထားမိကြတာပါ။ ဘာတွေပျက်သလဲဆို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်နေတာ ၊ သူတို့ရဲ့ စာရိတ္တပျက်နေတာ ၊ သူတို့ရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား ပျက်နေတာ ၊ သူတို့ရဲ့ စဉ်းစားဥာဏ်တွေ ပျက်နေတာ ၊ အဆိုးဆုံးကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဖျက်နေကြတာပါ။
လူယုတ်မာအချင်းချင်းကတော့ အားပေးကြမှာပေါ့။ သူတို့တွဲနေတဲ့ အချစ်လေး ၊ အသည်းလေး ၊ ဘာလေး ညာလေးဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ဗိုက်ပူ အဆီရွှဲ သူတို့ကိုကြိုက်တယ် ၊ ချစ်တယ်ထင်ရင်မှားမှာပေါ့။ ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေကြိုက်တာက ဒီလူကြီးဆီကကျလာမယ့် ရွှေတွေ ၊ ငွေတွေ ၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းနဲ့ စည်းစိမ်တွေဖြစ်နေတာ မသိ ၊ မမြင်နိုင်လောက်အောင် ဦးနှောက်ထဲသုတ်မွှန်နေတာလေ။
ကိုယ်များခေါက်ကနဲ မမာကြည့်ပါလား သူတို့ကိုလာမပေးနိုင်တဲ့ကိုယ့်ကိုပစ်ပြီး ပေးနိုင်တဲ့သူကိုတွဲမှာ ၊ ကိုယ်ကများ အပြည့်ပေးထားပြီး အနားနေခိုင်းမိတယ်ဆိုရင်တော့ မမာတဲ့ကိုယ့်ကို တခြားသူတွေနဲ့ပစ်ထားပြီး သူ့ကိုသာယာမှုပေးနိုင်တဲ့ အမျိုးသားတွေဆီ ကိုယ့်ငွေတွေ ၊ စည်းစိမ်တွေသုံး ပျော်ပါးနေမှာပါ။ ငနာကြီးကိုယ့်ကို အနစ်နာခံပြီး ပြုစုပေးမယ့် မယားအလိမ္မာလေးလို့တွေးရင် မှားမှာပေ့ါ။
ဒီအမျိုးသမီးကို ကိုယ်က ဘယ်နေရာက တွေ့ခဲ့တာလဲ ၊ ကိုယ်ဟာ ကာမပိုင်ရှိမှန်းသိရက် ရှေ့တိုးရဲတဲ့စိတ်ထားဟာ အချစ်လား ၊ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုလားဆိုတာ ခုတင်ပေါ်လဲမှသိပြီး မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ နောင်တတွေပိုက်ပြီး နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတာကို ရင်ဆိုင်လိုက်ဦးပေါ့။ နောင်တတွေ ၊ သောကတွေ ၊ မကျေနပ်ချက်တွေပိုက်ပြီး ဇောအတန်တန် ဖြတ်ရမယ်ဆို ဒီပုံနဲ့သေသွားရင် လူပြန်ဖြစ်ရင်တောင် ကံကောင်းရဲ့နော်။
အချစ်ကို မကစားကောင်းဘူးဆိုတာထက် ခံစားချက်တွေကို မကစားကောင်းပါဘူး။ ဒီခံစားချက်တွေဟာ ရေချိန်မြင့်လာတဲ့အခါမှာ မထိန်းသိမ်းနိုင်သူတွေ ခြေလှမ်းလွန်ကျွံပြီး အသည်းနာသူတွေ နာကြတဲ့ရလဒ်ပဲထွက်လာတတ်တာပါ။ အချစ်ကို ကစားတတ်သူတွေရဲ့ နိဂုံးဟာ သူတို့မျှော်လင့်ထားသလို တသွေမတိမ်း မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး။ ပျော်မယ်ထင်ထားတဲ့နေ့ရက်တွေမှာ စိတ်အားငယ်မှုတွေ ၊ အထီးကျန်မှုတွေ စတဲ့ အဆိုးဘက်က ခံစားချက်တွေကိုပိုက်ပြီး နောင်တတွေကို ပိုက်နေရမှာပါ။ ဒိုးတူဘောင်ဘက် လက်တွဲညီညီ နားလည်မှုတွေနဲ့ ရုန်းကန်လာခဲ့တဲ့ သက်တူရွယ်တူစုံတွဲတွေ ပျော်ပါးနေချိန်မှာ ကိုယ်ဘာကြောင့် သူတို့လို ဂုဏ်သရေရှိရှိ မပျော်ပါးနိုင်တာလဲ။ ကိုယ်ဟာ အချစ်နဲ့ကစားခဲ့လို့ပါ။ ခံစားချက်တွေနဲ့ ကစားခဲ့လို့ ရေရှည်မှာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေက ကိုယ့်ကို ပြန်ဒဏ်ခတ်နိုင်တယ်လေ။ အချစ်တွေ ၊ ခံစားမှုတွေနဲ့ ကစားခြင်း ကင်းပါစေ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%80%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-2/feed/0အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%90%e1%80%b0-%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%90%e1%80%b0-%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9/#respond Fri, 04 Dec 2015 03:11:51 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=21757
အသွင်မတူတဲ့ သူနှစ်ဦးဟာ ပေါင်းစပ်လို့မရဘူးတဲ့ ရှေးစကားကြားဖူးတယ်။ အသွင်မတူရင် ရေရှည်မမြဲဘဲ ကွဲကြတာပါပဲ။ ရည်းစားဘဝမှာ ကွဲရင်ကွဲ ၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် အိမ်ထောင်ဘက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အကြောင်းပိုသိလေ ရေရှည်ရှေ့ဆက်ဖို့ ညှိနှိုင်းဆက်ယှက်လို့မရတော့ဘဲ လမ်းခွဲကြတာပါပဲ။ ဘယ်အချိန်မှာဘဲ လမ်းခွဲရပါစေ ချစ်လက်စမကုန်သေးရင်တော့ ချစ်နေသူတွေဟာ ချစ်အရိပ်တွေ လွမ်းဆွတ်သတိရပြီး ကြေကွဲဝမ်းနည်းကြရတာပေါ့။
ခံစားမှုတွေ နုနယ်သေးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ၊ နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်လေးမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ လမ်းခွဲရတဲ့အခါ ဘာမှမလုပ်ချင် ၊ မကိုင်ချင် ၊ စားမဝင်လောက်အောင် အသည်းကွဲဝေဒနာကို ခံစားကြရတယ်။ သုံးဆယ်ကျော် ၊ လေးဆယ် အရွယ်အတိုင်အောင် ချစ်တတ်တဲ့သူတွေက ခံစားမှုတွေ ပြင်းထန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်တွေဟာ ကုန်ဆုံးဖြတ်သန်းဖို့ အတော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေပါပဲ။ အချိန်က ကုစားသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တိုင် အဲဒီအချိန်တွေဟာ မျက်ရည်တွေအဖော်ပြုနေတဲ့အချိန်တွေပါပဲ။
အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ်ဆိုတာကို တွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူနဲ့ကိုယ် ဖူးစာမပါလို့ ၊ ကြောင်းကျိုး မတိုက်ဆိုင်လို့ အခုလမ်းခွဲလိုက်တာဟာ ဇတ်မြောကြီးအတိုင်း မပျော်မရွှင် သွားနေရတာထက် ပိုသာပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခွင့်ရှိသေးတယ်လေ။ ရည်းစားနဲ့ပြတ်လို့ အသည်းကွဲနေရင် ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ချစ်ပြီးကြင်နာတဲ့သူ ၊ အခုခွဲလိုက်ရတဲ့ ရည်းစားဟောင်းထက် ပိုသာတဲ့သူ ရနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိသေးပါလားလို့ အကောင်းဘက်က မြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ လောကမှာ ယောက်ျားဆိုလို့ သူတစ်ယောက်တည်းရှိတာမှ မဟုတ်ပဲနော်။
အိမ်ထောင်ပြတ်စဲတယ်ဆိုတာ လုံးဝ သည်းမခံနိုင်လွန်းမှသာ တည်ထားတဲ့အိမ်ထောင်က ရုန်းထွက်ပြတ်စဲပြီး သူ့လမ်းသူလျှောက် ၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းပါ။ အိမ်ထောင်ကွဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေ မိဘဆွေမျိုး ၊ မောင်နှမသားချင်း ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေ ၊ လိုသလို မလိုသလို အပြောတွေ ၊ အပြုအမူတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ခွန်အားမွေးရဦးမယ်။ သားသမီးတွေရှိနေရင် သားသမီးတွေ မျက်နှာမငယ်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်။ ကိုယ့်ခံစားချက်ကတမျိုး ၊ အားငယ်စိတ်ကတဖုံ ၊ ဘေးပယောဂတွေဒဏ် ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မာန်တင်းရတာနဲ့ စိတ်ရော ၊ လူပါ ပင်ပန်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။ ကိုယ်ဟာ မီးဖိုပေါ်က ဖားသူငယ်ထက်တော့ အများကြီးသာတယ်လေ။
မီးဖိုပေါ်မှာ ရေထည့်ထားတဲ့အိုးထဲကို ဖားအရှင်တွေထည့်ကြည့် ၊ ပထမရေအေးအေးလေးနဲ့မို့ သူတို့ဟာ မီးဖိုပေါ် ရောက်နေကြမှန်းမသိဘူး။ မီးအရှိန်ကြောင့် ရေအေးကနေ နွေးနွေးလေးဖြစ်လာလည်း သူတို့ဟာ မီးမြှိုက်ခံနေရတယ်ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်သေးဘူး။ ဒီလိုနဲ့ရေဟာ ပူသထက်ပူလာပြီး လုံးဝမခံနိုင်လောက်တဲ့ အပူချိန်ရောက်မှ ရေနွေးအိုးထဲမှာ သူတို့ မီးမြှိုက်ခံနေရတယ်ဆိုတာကို သိရချိန် အရာရာ နောက်ကျသွားခဲ့ပြီလေ။ အရှင်လတ်လတ် အပြုတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့။ ဒါဟာ မှားယွင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးထဲက အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက် နမူနာယူစရာပါပဲ။
လူဆိုတာ ကိုယ့်အခြေအနေကို အမြဲသုံးသပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ အေးရာက ပူလာရင် ပူလာတဲ့အကြောင်းကို ဆန်းစစ် အဖြေရှာသင့်တယ်။ ပူသထက်ပူလာပြီ ၊ ထပ်အေးသွားဖို့ မရှိဘူးဆိုရင် ပွက်ပွက်ဆူတဲ့အထိ မစောင့်နေသင့်ဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာ မီးဖိုပေါ်တင်ထားတဲ့ အိုးထဲက ခုန်ထွက်သင့်တယ်လို့ အမြဲချိန်ဆသင့်တယ်။ ကိုယ့်ခံနိုင်ရည်ထက် ကျော်လွန်လာသည့်တိုင် ရုန်းထွက်မှုမလုပ်ရင် မီးဖိုပေါ်ကဖားလို အရှင်လတ်လတ် အပြုတ်ခံရသလိုမျိုး ဒီတဘဝတာမှာ ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ (တိုးပြီးတော့လည်း စိတ်ဆင်းရဲနိုင်သေးတယ်) ရှေ့ဆက် စခန်းသွားရပေဦးမှာပေါ့။
ကိုယ်တွေရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ အရင်လို သာသာယာယာမဟုတ်တော့ဘဲ တကျက်တကျက်ဖြစ်တဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ဟာ အပတ်စဉ်ကနေ နေ့စဉ် နောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်တာနဲ့ စကားများရန်ဖြစ် သာယာမှုတွေ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ဒီလိုလူနဲ့ ကျန်နေသေးတဲ့ ကိုယ့်သက်တမ်းတလျှောက် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အတူနေထိုင်သွားမှာလားလို့ ရေရှည်ကို စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ တနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ တလပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ တနှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် စောရင်စောသလောက် ကိုယ့်အတွက် ကံကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ရှာဖွေခွင့် ခပ်စောစောလေး ရနိုင်မှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လူထားမှာတွေ ၊ နောက်လူယူမှာတွေကို လောလောဆယ်မစဉ်းစားဘဲနဲ့ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှု ကိုယ်ရယူနိုင်သေးတယ်လို့တွေးပါ။ လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းနိုင်သေးတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ပေးတဲ့သူနဲ့ မဆက်ဆံရတော့ဘူးလေ။
တိုးတက်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုခံစားနေရတဲ့ မိန်းမသားတွေကို ကာကွယ်မှု အပြည့်အဝပေးကြတယ်။ အကြောင်းအချက်အလက်ခိုင်လှုံရင် အမျိုးသမီးကို ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲအောင် ခြောက်လှန့်တတ်တဲ့အမျိုးသား ၊ ပြုမူတတ်တဲ့အမျိုးသား (ရည်းစား သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း)ကို အဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ဘယ်လောက်အကွာအဝေးအထိ မလာရဘူးလို့ ကာလအတိုင်းအတာအထိ ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။ ဒါကိုချိုးဖောက်ရင် ထောင်ဒဏ် ၊ ငွေဒဏ်ကျခံရတယ်။ ဆိုလိုတာက အမျိုးသမီးတွေဘက်ကနေ ဥပဒေက ရပ်တည်မှုပေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ ဆိုးတဲ့အမျိုးသားကို ရည်းစားတော်မိရင် ၊ ခင်ပွန်းတော်မိရင် တဘဝစာ ကြောက်နေရသလို ဘဝသေသွားတတ်တယ်နော်။ တကယ်ဥပဒေကျူးလွန်နေတဲ့ ထင်ထင်ရှားရှားပြစ်မှုရှိနေသူတွေတောင် ပြစ်ဒဏ်ချဖို့ကို လိုတမျိုး ၊ မလိုတမျိုးတွေအပြင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေက လိုရင်လိုသလိုပေးနေတော့ ဥပဒေက အမျိုးသမီးတွေကို အပြည့်အဝ အကာအကွယ်မပေးနိုင်သေးတဲ့ ကာလတလျောက်လုံး ကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုယ် သတိရှိရှိ ၊ ဥာဏ်ရှိရှိနဲ့ ဆုံးဖြတ်နေထိုင်ရမှာပဲပေါ့။
နင်နဲ့ နင့်မိသားစုကို ဘာလုပ်လိုက်မယ် ၊ ဘာဖြစ်သွားမလဲ စောင့်ကြည့်လိုက်ဆိုတဲ့စကားက ဒီဘဝကြီးကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်အောင် ၊ သူ့စိတ်တိုင်းကျ ကိုယ့်ကို လုပ်ချင်သလိုလုပ်ခွင့်ရအောင် တဘဝလုံး ပေးဆပ်လိုက်ရမလိုကြီးနော်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ ရည်းစား ၊ ခင်ပွန်းအဖြစ် စဉ်းစားမယ့် အမျိုးသားကို ကြောက်လို့လည်း ခေါင်းမငြိမ့်ပါနဲ့ ၊ မလွန်ဆန်နိုင်လို့လည်း ခေါင်းမငြိမ့်ပါနဲ့။ လက်မှတ်တခုနဲ့ ၊ သဘောတူညီမှုတခုဟာ ကိုယ့်တဘဝလုံးကို ဝါးမြိုသွားနိုင်တယ်လေ။
တခါတလေကျတော့ အမျိုးသားတွေက မခြိမ်းခြောက်လိုသည့်တိုင် အမျိုးသမီးတွေက “အပြစ်မမြင်ပါဘူး ….. ချစ်ချင်တာပဲသိတဲ့နောက်မှာ …. ဖြစ်သမျှဟာအကောင်းပဲပေါ့” ဆိုတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ သီချင်းစာသားထဲကလို သူဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး ၊ မကြင်နာပစေ ၊ ပစ်ခါပစေ အပြစ်မမြင်ဘူး ချစ်မြဲချစ်လျက် ချစ်ချင်နေတုန်း ၊ ဘဝကို နှစ်ယောက်အတူ တည်ဆောက်လိုဆဲပဲ ဆိုသူတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ သူများတွေကိုတင် ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာကို ကိုယ်ပြောတာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက အသည်းအသန်ခံစားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေ အခုများပြန်တွေးရင် ရယ်စရာကြီးကို ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။
ကျွန်မအခု အိမ်ထောင်ရေးသာယာတယ်။ ခင်ပွန်းကောင်းကိုရထားတယ်။ ဇနီးကောင်း ၊ မိခင်ကောင်းဘဝမှာကျေနပ်တယ်။ ဒါတွေမတိုင်ခင်က ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း (ယခု ကျွန်မခင်ပွန်းမဟုတ်သူအတွက်) ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆယ်စုနှစ်တခုလောက် အသည်းကွဲဖူးတယ်ဆိုရင် အံ့သြသွားကြမလား။ ကျွန်မက ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မနဲ့ယှဉ်ပြီး အတွေ့အကြုံနုနယ်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဘဝမနစ်မွန်းဖို့ အကြံပေးချင်တာပါ။ လက်ခံတာ ၊ လက်မခံတာကတော့ သူ့အပိုင်းပေါ့လေ။
အချစ်ဆိုတာ လိုက်လေ ပြေးလေတဲ့။ ဒီအတိုင်းပဲ ကိုယ်ကအလျှော့ပေးချစ်လေ တဖက်က ကိုယ့်အချစ်ကို တန်ဖိုးမထား အနိုင်ယူလေပဲ။ လွယ်လွယ်မြင်အောင်ပြောမယ်ဆို ရှားပါးတဲ့ပစ္စည်းပေးသည့်တိုင် ပေါပေါလေးရနေတော့ တန်ဖိုးမထားတတ်တာမျိုးလိုပေါ့။ ငွေတွေ ပေါချင်းသောချင်း မလိုချင်လောက်အောင်ရနေတော့ ရနေတဲ့ငွေအပေါ် တန်ဖိုးထားမှုသိပ်မရှိတော့ဘဲ ပေါ့ပေါ့လေးသုံး ၊ မလိုရင် ပစ်ထားလိုက်တာမျိုးပေါ့။
ကိုယ်က တကယ့်အချစ်စစ် ၊ အချစ်မှန်နဲ့ ချစ်မြတ်နိုးပြီး ပေးဆပ်နေသည့်တိုင် တန်ဖိုးမထားတတ်သူတွေက ကိုယ့်အချစ်ကိုလည်း တန်ဖိုးမထား ၊ ကိုယ့်ကိုလည်း တန်ဖိုးမထား ၊ ကိုယ့်ပေးဆပ်မှုဆိုတာတွေလည်း မျက်ကွယ်ပြုလို့ ဒီ့ထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာ အပြစ်တွေတင် ၊ မကျေမနပ်တွေဖြစ် ၊ နှစ်ဦးစကားဆုံတိုင်းရန်ဖြစ်ကြရတာ ဘာကြောင့်များလဲကွယ်။ သူဟာ ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးမထားလို့ပေါ့။
လူ့သဘာဝအရ လူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးပါ။ ကိုယ်ပေးဆပ်သလောက်ပြန်မရလေ ဒီဘဝကြီးကို စိတ်နာလေ ၊ ဒီလူကိုစိတ်နာလေ ဒီလူနဲ့လည်းမခွဲနိုင် ၊ ရနေတဲ့ဘဝကြီးကိုလည်းမကျေနပ်နဲ့ မီးဖိုပေါ်က ဖားသူငယ်တွေလို တဘဝလုံးထိုးအပ်လို့ ပေးဆပ်လိုက်တော့မှာလား။ ဒါကတော့ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့။ သည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ လမ်းခွဲလိုက်ပါ။ ခံတော့ ခံစားရမှာပေါ့။ ဒီခံစားမှုတွေကို အချိန်က ကုစားသွားပါလိမ့်မယ်။
သူနဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့် ဘဝခရီးကို စိတ်ကူးယဉ်ထားနှင့်သူမို့ သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့အခါ (ကွဲကွာသွားတဲ့အခါ)မှာ သူမပါတဲ့ ကိုယ့်ဘဝကြီးထဲ ကိုယ့်ဘာသာနေပျော်ဖို့ ကျင့်ယူလိုက်ပါ။ အိမ်ထောင်ကွဲလို့ သားသမီးတွေကျန်ခဲ့ရင် မိဘတွေအဆင်မပြေကြလို့ စိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေမဖြစ်လာတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့။ အဖေ့နေရာကနေတိုးလို့ ဂရုစိုက်ရုံရှိတာပေါ့။ စိတ်လေနေတဲ့အချိန် ၊ စိတ်ဓါတ်ကျနေတာတွေ နည်းသထက်နည်းနိုင်အောင် အာရုံလွှဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ အာရုံမစိုက်နိုင်လည်း ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်ရာ ၊ ဝါသနာပါရာတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ လေ့လာရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးစေပါ။ ဒီအခါ ဝမ်းနည်းတဲ့ ခံစားမှုကြီးနဲ့ ၊ ကြွေကွဲနေတဲ့စိတ်တွေဟာ ပါးလာတာ ၊ ဖြေလျော့လာတာတွေ အချိန်နဲ့အမျှ သတိထားမိမှာပါ။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစိတ်ကိုပဲ အလေးပေးနေရင် ဒါနဲ့ပဲ အချိန်တွေကုန်ပြီး ကိုယ့်ဘဝအတွက် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ဖို့ အာရုံမထားနိုင်တော့ဘူးလေ။
အချစ်စစ်ဟာ အချိန်အလိုက် ပြောင်းလဲသွားရိုး ထုံးစံမရှိပေမယ့် အချိန်က အချစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ငယ်နုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ ဒီအချစ်ဆိုတာကို ရူးရူးမူးမူးခံစားခဲ့ပေမယ့် အချိန်တွေပြောင်းလဲလို့ အသက်တွေရလာတဲ့အခါမှာ ရင့်ကျက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေက ရင့်ကျက်မှုပေးတဲ့အချစ် ၊ နားလည်မှုပေးနိုင်တဲ့သူကိုပဲ လိုအပ် တောင့်တလာပါတယ်။ ဟိုတချိန်က အသည်းကွဲဒဏ်ရာကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆယ်စုနှစ်လောက် ကုစားခဲ့ရတဲ့ကျွန်မ အခုလို သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုရနေချိန်မှာ ငါဟိုတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်မကျတာ (လမ်းခွဲခဲ့ရတာ) အတော်ကံကောင်းပါလား ။ ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်လှပါလားလို့ အမြဲကျေနပ်မိတယ်။
ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးက အတိတ်ကိုပြန်ပြင်ပေးမယ်ပြောသည့်တိုင် ကျွန်မဟာ ကျွန်မအတိတ်ကို ဒီအတိုင်းမပြောင်းမလဲရှိစေမှာပါ။ လူဆိုတာ ခါးသည်းမှုဆိုတာကိုလည်း ရင့်ကျက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လေ။ ဒီလိုခါးသည်းမှုတွေ ၊ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှ ရင့်ကျက်တဲ့အသိဥာဏ်နဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ရလာတာမဟုတ်လား။
ဟိုအရင်အချိန်ကိုပြန်သွားရင် အဲဒီအရွယ်တုန်းက အဲဒီလူကို အဲဒီခံစားမှုအတိုင်း ပြန်ခံစားနေဦးမှာဖြစ်ပေမယ့် ဒီလူ အခုအချိန်မှာ ကျွန်မရှေ့ပေါ်လာရင်တောင် အချိန်တွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီမို့ ဘာမှခံစားရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ လူချင်းတော့ အတူတူပဲနော်။ ခံစားမှုတွေကို အချိန်ကပြောင်းလဲလိုက်တာပါ။ ဆယ်ကျော်သက်ခံစားမှုနဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံ ၊ လောကဓံတွေဟာ ရင့်ကျက်လာတဲ့အရွယ်မှာ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်ချင်း မတူနိုင်တော့ဘူး။ မတူသင့်တော့ဘူး။ အချိန်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ ရင့်ကိုရင့်ကျက်လာရမှာလေ။
အတွေ့အကြုံနဲ့ ခံစားချက်တွေ ၊ အတွေးအခေါ်တွေ ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို စိတ်ဒဏ်ရာပေးခဲ့တဲ့သူကိုတောင် သူ့ကြောင့် ဒီခံစားမှုတွေရခဲ့ပါလား ၊ ဒီကနေသင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါလားလို့ သူ့ကို ကျေးဇူးတောင်တင်မိတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ကြုံဖူးမှ ဒီလိုလူမျိုးနဲ့နောက်မကြုံဖို့ သတိထားတတ်လာမှာပေါ့။ မီးဟာပူမှန်းသိရက်နဲ့ အချစ်လူစွမ်းကောင်းလုပ်ပြီး မီးပုံထဲခုန်ချမယ်ဆိုရင်တော့ တဘဝစာပေးဆပ်လိုက်ပေါ့။
ကျွန်မကတော့လေ အချိန်ရဲ့ကုစားမှုတွေနဲ့ ရင့်ကျက်လာတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ရရှိလာချိန်မှာ တချိန်က ကိုယ့်ကိုအပြင်းအထန်ခံစားစေခဲ့တဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ သူ့ကြောင့်မှမဟုတ်ရင် ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေဟာ ရင့်ကျက်လာဦးမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ အချစ်ဦးနဲ့လွဲခဲ့ပေမယ့် အချစ်စစ်နဲ့ချစ်တတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ သူ့ကြောင့်မှမဟုတ်ရင် စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နားလည်မှုပေး ချစ်တတ်ဖို့ဆိုတာကို ကျွန်မဘယ်သိနိုင်ဦးမလဲ။ နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်ကိုစိတ်ဒဏ်ရာပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ကြောင့်သာမဟုတ်ရင် ဒီစိတ်ဒဏ်ရာကို ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ ကျော်ဖြတ်ရမယ်လို့ ကျွန်မသိနိုင်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးလေ။
အချစ်ရေးအဆင်မပြေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ၊ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အရှင်လတ်လတ် မီးမြှိုက်ခံရတဲ့ဖားသူငယ်လို ကိုယ့်ဘဝကိုယ် မနစ်မွန်းပါစေနဲ့နော်။ အသက်ရှင်နေသမျှ ပျော်ရွှင်ခွင့်ရှိသင့်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သူနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ ၊ သူနဲ့လက်တွဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာ မပျော်နိုင်ဘူးဆိုရင် မပျော်အောင်လုပ်နေသူတွေနဲ့ ဝေးဝေးခွါခွါနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ အရင်ပျော်နိုင်ဖို့ ပြန်လေ့ကျင့်ပါ။ မိမိစိတ်ဝင်စားသေးရင်တော့ နောက်တဆင့်မှာ ကိုယ့်ကိုတကယ်နားလည် တန်ဖိုးထားပြီး ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့သာ ဘဝတခု အတူတည်ဆောက်ပါ။ အသွင်တူမှ အိမ်သူဖြစ်တာပါ။ အကြိုက်ချင်းမတူတောင် ခံစားချက်ချင်းဝေမျှ တူညီနိုင်ရမယ် ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှုအပြန်အလှန်ပေးနိုင်ရမယ် ၊ အနည်းဆုံး အချစ်ချင်းတော့ တူညီနေရမယ်လေ။ ဒါမှလည်း အိမ်ထောင်တခုဟာ ပျော်ရွှင်စွာ မြဲမြံနေနိုင်မှာပေါ့။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%90%e1%80%b0-%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9/feed/0ခင်ပွန်းကောင်း ၊ ဖခင်ကောင်းကိုမှ လက်တွဲလိုသူ အမျိုးသမီးများအတွက် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%81%8a-%e1%80%96%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%81%8a-%e1%80%96%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac/#respond Thu, 22 Oct 2015 14:19:19 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=17061
အပျိုစင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အလှပဆုံးအိမ်မက်ဟာ ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်ကြင်နာပြီး ကိုယ်က ချစ်ခင်ကြင်နာရတဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ ရိုးမြေကျ အတူပေါင်းဖက်သွားရဖို့ပါ။ ဒီ့ထက်တဆင့်တိုး ရလိုစိတ်မှာတော့ အဲဒီလို ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက အားကိုးရတဲ့သူ ၊ ခင်ပွန်းတာဝန်တင်မက အိမ်ထောင့်တာဝန်ကို ကျေတဲ့သူဖြစ်ချင်ကြတာ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆန္ဒပါ။ ဒီ့ထက်တဆင့်တိုးသွားပြီဆိုရင်တော့ မိမိတို့နှစ်ဦးရလာတဲ့ရင်သွေးကို မတောင့်မတ မကြောင့်မကြထားနိုင်အောင် ကြိုးစားတဲ့သူ ၊ မိသားစုတွင်းသာယာပျော်ရွှင်အောင် ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူ ၊ ဇနီးနဲ့ သားသမီးအပေါ်မှာ တာဝန်ကျေပွန်ပြီး ကြင်နာနွေးထွေးတဲ့ ဖခင်ကောင်း ၊ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ပါ။
ဒါပေမယ့်လည်းလေ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေ ၊ မိခင်တွေ အများစု မှတ်ချက်ပြုသံကို ရှေ့သို့မဆက်ခင် အနောက်သို့ မျှော်တွေးပါ ၊ ဇနီးကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် အလိုအပ်ဆုံးအရာ ၊ မီးဖွားပြီးစမိခင်သည် အကူအညီလိုသောသူဖြစ်သည် ၊ ကလေးမိခင်များကို နားလည်မှုပေးပါ ဆိုတဲ့ ပို့စ်တွေရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အများစုသော အမျိုးသမီးတွေက သူမတို့ခင်ပွန်းတွေဆီက သိတတ်မှု ၊ ကြင်နာမှု ၊ နားလည်မှုတွေ မရတော့ဘူး။ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ ဖောက်ပြားနေတယ်စသဖြင့်သော မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးတွေကို ဖတ်ရတော့ အမျိုးသမီးအချင်းချင်းမို့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ ကျွန်မ ရရှိခံစားရတဲ့ ခင်ပွန်းရဲ့ နားလည်သိတတ်မှု ၊ ကြင်နာမှု ၊ ဖေးမမှု ၊ ယောကျာ်းကောင်းပီသမှု ၊ ခင်ပွန်းကောင်းပီသမှု ၊ ဖခင်ကောင်း ပီသမှုတွေကို ကျွန်မရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေလည်း ရရှိခံစားစေချင်တာ အမှန်ပါ။
အိမ်ထောင်ရေးဟာ ကမ်းပါးထက်မှာ ရပ်နေရသလိုပါပဲ။ သာယာတယ်ဆိုရင် လှပတဲ့ရှုခင်းနဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့လေပြေတွေကို သူများတကာထက် ပိုခံစားနိုင်ပြီး စိတ်ကြည်လင်မှုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကတဆင့် ဘဝမှာနေရတာ ပျော်ရွှင်လာတယ်။ အရာရာမပြည့်စုံနိုင်တဲ့ လူ့ဘဝလိုအင်ဆန္ဒတွေထဲမှာတောင် ရရှိနေတဲ့ မိသားစုချစ်ခင်ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ဘဝကြီးဟာ အရာရာပြည့်စုံနေသလို ခံစားလာရစေတယ်။ အိမ်ထောင်ထဲမှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ပုတ်ခတ်ဆဲဆို ရန်ဖြစ်တွန်းထိုးနေမယ်ဆို အခန့်မသင့်တဲ့အချိန်မှာ အိမ်ထောင်ရေး ချောက်ကမ်းပါးကနေ ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်လေ။ စိတ်ကောကိုယ်ပါ ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဆို တော်သေးရဲ့ ။ ကလေးတွေရှိနေရင် သူတို့ပါ စိတ်ဒဏ်ရာရသွားမယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရွေးရင် အရမ်းသတိထားရတယ်။ ခဏတာမကြည့်ဘဲ တဘဝတာ ကြည့်ရတယ်။
ကိုယ်နှစ်ဦး ၊ သူ့မိဘ ၊ ကိုယ့်မိဘ ၊ သူ့မောင်နှမ ၊ ကိုယ့်မောင်နှမတွေ ပါဝင်လာမယ့် ဆက်ဆံရေးဆိုတာကိုလည်း ခံစားတွေးကြည့်ရတယ်။ အတွေးထဲမှာတောင်မှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်နေရင် ရှေ့မဆက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဥပမာ ကိုယ်တွဲနေတဲ့သူက ကွမ်းရံဖန်ရံခါ စားတတ်တယ်လို့ပြောမယ် ၊ ကိုယ်နဲ့တွေ့ချိန်မှာတောင် ကွမ်းစားထားတဲ့အနံ့ကို ခံစားမိတယ်ဆို ကွမ်းစွဲနေတဲ့သူကို အပြတ်ဖြတ်ခိုင်းဖို့ထက် သူစွဲနေတဲ့ကွမ်းအနံ့ကို ရာသက်ပန် ခံစားသွားနိုင်မလားလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ အရက် ၊ မူးယစ်ဆေး ၊ မိန်းမ ၊ ဘောလုံး ၊ ချဲ ၊ နှစ်လုံး ၊ သုံးလုံး စသဖြင့်သော လောင်ကစားတွေ ၊ ဂိမ်းတွေ ဝါသနာပါတဲ့သူဆိုတာ မယူခင်ကတည်းက ထဲထဲဝင်ဝင် သိနိုင်အောင် လေ့လာစုံစမ်းရမှာပါ။ ရပြီးမှ ဒါတွေစွဲနေတာ သိနေတယ်ဆိုရင် …. သမီးရေ ဒါဟာ သမီးညံ့လို့ သမီးခံရတာပါ။ ကိုယ်က ထဲထဲဝင်ဝင်မှ မလေ့လာခဲ့ဘဲနဲ့ ယူခဲ့မိတာကိုး။ ယူပြီးမှ အပြစ်ပြောနေရင် ကိုယ်ပဲမောရုံရှိမယ်။ သူတို့က ကိုယ့်မယူခင်ကတည်းက ဒါတွေ နှစ်ရှည်စွဲနေခဲ့တာလေ။ ကိုယ့်ကိုယူပြီးမှ ဒါတွေစွန့်လွှတ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဆို ကိုယ်ကံကောင်းတာပေါ့။ ဒီတော့ ရပြီးမှ ဒီအကြောင်းတွေ သိရတယ်ဆို နေစဉ်နဲ့အမျှ သူ့ကိုပြစ်တင်ပြောဆိုနေဖို့ထက် သူစွဲနေတဲ့အရာကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစား ၊ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ရင်တော့ ကလေးမယူခင် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ရွေး လမ်းခွဲလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဒါတွေကို ချစ်သူဘဝမှာကတည်းက ကြိုသိခဲ့တယ်။ သူစွဲနေတဲ့အရာကို ရေရှည်မှာ ကိုယ်ကသည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့် သူ့ကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ။ ကိုယ့်ကို ပိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင် လရှည် ၊ နှစ်ရှည် အချိန်ယူပြီး ဒါတွေလုံးဝပြတ်အောင် သူဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကလည်း သူ့ကို ချစ်သေးတယ်ဆိုရင် သူတကယ်ပြောင်းလဲတာ ဟုတ် ၊ မဟုတ် စောင့်ကြည့်ပါ။ ဒီလိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်း သူပြတ်သွားလောက်ပါပြီ ၊ လာကြွေပြနေတယ် ၊ သနားပါတယ်လို့ ဘေးကလှော် ကိုယ်ကလက်ခံချင်ရဲ့ဖြစ်နေရင်တော့ သူတကယ်ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်အထိ ကိုယ်မစောင့်နိုင်လို့ သူဟာ ဒီအရာတွေ ပြန်စွဲသွားတာပါ။ အမှန်ပြောမယ်နော်။ အမျိုးသားတွေမှာလည်း ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့စိတ် ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုပြမှ သူတို့က တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း သိတာလေ။ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိတဲ့လူကတော့ ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးမထားဘဲ သူစွဲနေတဲ့ဒီအရာတွေကို ဆက်တန်ဖိုးထားနေနိုင်တယ်။ ဘာအရေးလဲ။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အရာကို လက်ထပ်ပြီးမှ ပြင်ခိုင်းလို့မပြင်တာထက် လက်မထပ်ခင်ကတည်းက မပြင်တာကို ကြိုသိခွင့်ရတာပဲ အတော် ကံကောင်းလှပြီ။
ကျွန်မအပျိုကတည်းက ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးကို လိုချင်တယ်ဆိုတာ စိတ်ကူးသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုလို ချထားခဲ့တာ။ တိုက်ဆိုင်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။ ကျွန်မစိတ်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပိုနားလည်အောင် နှိုင်းယှဉ်ပြချင်တာပါ။ ကျွန်မက ကွမ်းတပြစ်ပြစ်နဲ့ ကွမ်းစားတဲ့သူဆိုရွံတယ် ၊ ဆေးလိပ်နံ့လည်း မခံနိုင်ဘူး ၊ အရက်သောက်တတ်တဲ့သူဆို အမျိုးထဲရှိနေရင်တောင် နှုတ်မဆက်တတ်တဲ့သူ ၊ လောင်းကစားကြိုက်တဲ့သူဆို ဖြုန်းတီးရေးသမားလို့မြင်တယ် ၊ ထည်လဲတွဲတတ်တဲ့ယောကျာ်းဆို သူ့ဘာသူ ဘယ်လောက်ရှိနေနေ ဘာကြီးဖြစ်နေနေ အထင်ကိုသေးတာ ၊ ဆေးသမားဆို နှာခေါင်းရှုံ့တတ်သူ ၊ ဂိမ်းသမားဆို အချိန်ဖြုန်းတဲ့သူအဖြစ်မြင်တတ်သူ စသဖြင့် အားလုံးခြုံလိုက်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေကပြောတယ် ဒီတသက်နင်ယောကျာ်းမယူနဲ့တော့တဲ့။ သကြားမင်းဆင်းလာတောင် နင့်ဆန္ဒပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပဲ။ ဘာဖြစ်လဲ။ ကိုယ်လိုချင်တာမရရင် ရရာနဲ့ နီးစပ်ရာပဲယူမယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာ ကျွန်မ မပါဘူးလေ။ ယူပြီးတော့မှ ယူမိလေခြင်းလို့ စိတ်ဆင်းရဲနေရတာထက်စာရင် မယူခဲ့တာကမှ စိတ်ချမ်းသာသေးတယ်။ တစ်ယောက်တည်းရှိနေတာချင်းအတူတူ အပျိုကြီးဂုဏ် နဲ့ တခုလပ်ဂုဏ် ဘယ်ဟာက ပိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းသလဲနော်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ စိတ်ကူးထဲက ရည်ရွယ်ထားသူနဲ့ ဖူးစာဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မကိုယ်တိုင် ပြီးပြည့်စုံသူမဟုတ်လို့ သူ့ကို ပြီးပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရမယ်လို့ ကျွန်မ မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ သူ့ကိုလည်း ကျွန်မမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီး သူ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်း နားလည်နိုင်အောင် ၊ ပြင်နိုင်ရင် အတူပြင်ကြရအောင် ၊ ခွင့်လွှတ်သင့် ခွှတ်လွှတ်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားကျင့်ယူခဲ့ရတာပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။ Perfect ဖြစ်တဲ့လူဆိုတာ လောကမှာ မရှိသေးပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်ကိုယ်စီ ၊ အားနည်းချက်ကိုယ်စီ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါကို နားလည်လက်ခံထားဖို့ လိုတယ်လေ။
အားကိုးရတဲ့သူကိုပဲ ယူလိုစိတ်ရှိတဲ့ကျွန်မဟာ ချမ်းသာတဲ့သူမှ ယူမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မကူးခဲ့ဘူး။ အားကိုးရတဲ့အရည်အချင်းရှိနေတဲ့သူဟာ ကိုယ်နဲ့အတူ ဒိုးတူဘောင်ဘက် လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ သူ့အရည်အချင်းကြောင့် အချိန်နဲ့အမျှ အမြင့်ရောက်နိုင်တယ်လေ။ ကိုယ်တွေက မှန်မှန်ကြိုးစားသွားဖို့ပဲလိုတာ။ ပိုက်ဆံရှိသူကိုမှ အားကိုးရတဲ့သူလို့မြင်ပြီး ယူခဲ့သူတွေကတော့ ချမ်းသာတဲ့သူရဲ့ဒဏ်ကိုတော့ ခံရမှာပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ချမ်းသာတဲ့သူအများစုက အမြင့်တနေရာ ရောက်နေပြီးအနေအထားမို့ အနိမ့်မှာရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ကို အတည်တကျ ယူခဲ့တာတောင် တော်တော် ချစ်လို့ပဲ။ တန်းတူအဆင့်အတန်း ယူတာချင်းအတူတူတောင် ယောကျာ်းလေးရဲ့ စိတ်ထားနဲ့ အပျော်အပါးကို မိန်းကလေးရဲ့စိတ်ထားနဲ့ အပျော်အပါးတွေ နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖူးဖူးမှုတ်ကြီးလာခဲ့တဲ့သူတွေ ၊ ပစားပေး ကြီးလာခဲ့တဲ့သူတွေကို ခင်ပွန်းတော်ထားရရင် ကိုယ်တိုင်က ဖူးဖူးမှုတ်ထားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ဟာ ဒီလိုအနေအထားမှာ အသားကျနေပြီ။ သူက ကိုယ့်ကို ဖူးဖူးမှုတ် မျက်နှာညိုမခံအောင် အိမ်ထောင်သက်တလျောက် ပေါင်းသင်းတယ်ဆိုရင် သူဟာ ကိုယ့်ကို သူ့ကိုယ်သူထက် ပိုချစ်လို့ပါ။
ကျွန်မအရင်ပို့စ်တွေမှာလည်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အိမ်ထောင်မပြုခင် သူကပိုချစ်အောင် ၊ ကိုယ်ကပိုချစ်အောင် ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ ၊ ချော့မော့အရှုံးပေးတာတွေဟာ အိမ်ထောင်ပြုပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက်တလျောက်လုံး ချစ်သူတုန်းကလို ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ ၊ ချော့မော့အရှုံးပေးတယ်ဆိုတာကို တဘက်တည်းက ဘယ်တော့မှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်မပြုခင်အခြေအနေက စိတ်ကူးထဲမှာလို (ခဏတာတွေ့ချိန်လေး) ချစ်သူနှစ်ဦး ပျော်ပျော်ကုန်ဆုံးသွားတာလေ။ ဒါတောင်မှ တခါတလေ စိတ်ကောက် ၊ ရန်ဖြစ် ၊ ထရိုက်ဆဲဆိုတာတွေ ရှိတတ်ကြသေးတယ် မဟုတ်လား။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင်တော့ ဘဝထဲတိုးဝင်လိုက်တာလေ။ အရင်လို ခဏလေးတွေ့ရတော့တာမှမဟုတ်တာ နေ့စဉ် ၊ အပတ်စဉ် ၊ လစဉ် ၊ နှစ်စဉ် အိမ်ထောင်သက်တလျောက် အမြဲလို တွေ့နေရပြီ ။ ဒီအသံကြားနေရပြီ။ ဘဝအမောတွေထဲမှာ အရင်ကလို ချိုသာသံတွေ ပျောက်ပြီး သက်ပြင်းမောတွေ ဝင်လာပြီ ၊ အနမ်းတွေမပေးခင် အပူတွေ ဝေမျှ ၊ အချစ်တွေမဖုံးခင် ဝင်ငွေ ၊ ထွက်ငွေတွေတွက်ချက်ပြောဆိုနေရတော့ အိမ်ထောင်သက်အလျောက် တယောက်ကိုတယောက် ရိုးလာတယ်ဆိုတာထက် ဘဝအမောတွေကြောင့် နှစ်ယောက် ပန်းလာကြတာပါ။
အိမ်ထောင်စပြုပြီဆို အမျိုးသားက ငါ့မယားက ဘယ်လိုတော်တာ ၊ ငါ့ကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်တာ ၊ ဘယ်လိုသိတတ်တာလို့ ဂုဏ်ယူချင်ကြသလို အမျိုးသမီးတွေကလည်း ငါ့အမျိုးသားက ငါ့ကိုဘယ်လိုချစ်တာ ၊ ဘယ်လိုအလိုလိုက်တာ ၊ ဘယ်လိုယုယကြင်နာတာ စသဖြင့် ဂုဏ်ယူချင်ကြပါတယ်။ ဒါကို ဘဝတသက်တာ မြဲနေမယ်လို့လည်း မှတ်ယူကြတယ်လေ။ ဘဝတသက်တာမြဲဖို့ဆို နှစ်ယောက်စလုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေထိုင်ပါမှ ဘဝတသက်တာလုံး ဒီလိုယုယကြင်နာမှု ၊ သိတတ်မှု ၊ နွေးထွေးမှု ၊ နားလည်သိတတ်မှုဆိုတာတွေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာပါ။
နှစ်ဦးဆက်ဆံရေး အမြဲနွေးနွေးထွေးထွေးရှိဖို့ ပထမဦးစွာ ဘေးစကားတွေ မဝင်နိုင်အောင် နှစ်ယောက်စလုံးက စည်းလုံလုံ ကာထားရပါမယ်။ ကိုယ့်လင်မယား သာယာမှု ၊ မသာယာမှုဆိုတာကို ကိုယ့်မိဘ ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအပါအဝင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ မပြောပြပါနဲ့။ ဝင်စွက်ဖက်ခွင့် မပေးပါနဲ့။ ဥပမာ- ငါ့ယောက်ျားက ငါ့ကိုဘာဝယ်ပေးတယ်ကအစ ဘာချက်ကျွေးတယ် ၊ နှိပ်ပေးနင်းပေးတယ်၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတယ် စသဖြင့် အိမ်တွင်းရေးကိစ္စကို အိမ်တွင်းရေးမှာပဲ နှစ်ဦးသိရုံရှိပါစေ။ မိဘမောင်ဖွားအပါအဝင် တစိမ်းတွေထဲမှာလည်း လိုသူရှိ ၊ မလိုသူတွေရှိတယ်လေ။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က ချစ်လို့လုပ်ပေးသည့်တိုင် သူတို့ သိမြင်ကြားရပြီဆိုရင် ဝင်နှောက်ချင်ကြတယ် ။ ဝင်သွေးထိုးချင်ကြတယ်။ ဒါက အိမ်ထောင်သက်နုနုမှာ စတွေ့ရတာပါ။
နောက်ပိုင်း လင်မယားအချင်းချင်း စကားများနိုင်တယ် ၊ အငြင်းပွားနိုင်တယ် ၊ ရန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်မကြားအောင် ဖြေရှင်းပါ။ မိဘဆွေမျိုး ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေမသိအောင် သိုသိပ်ပါ။ ပေါက်ကွဲဖြေရှင်းလိုက်မှ ဖြစ်မယ်ဆို ကိုယ့်ကိုမသိတဲ့ တစိမ်းပတ်ဝန်းကျင်နေရာမျိုး (ဥပမာ ပန်းခြံလို ၊ ပန်းဥယျာဉ်မျိုး) မှာ သွားပြီး ဖြေရှင်းပြောဆိုပါ။ ကိုယ်တွေမသင့်မြတ်တာကို သူများအားမရပါစေနဲ့။ အပြန်အလှန် အကျိတ်အနယ် ရှင်းလင်းပြီး သဘောတူသွားတဲ့အထိ ဖြေရှင်းသဘောတူညီပြီးပါမှ နေအိမ်ကို ပြန်လာပါ။ မပြော ၊ မပြောနဲ့ စိတ်ထဲသိုခဲထားပြီး မခံနိုင်မှ ပေါက်ကွဲထွက်တာမျိုးကို မလုပ်ပါနဲ့။ အဲဒီလိုမြိုသိပ်ထားရင် ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့လည်း သည်းမခံနိုင်ဘဲ ထစကားများရာကနေ အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်ဆိုသလို လင်မယား ကွဲတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်တယ်လေ။ ကျွန်မတို့ဆို အိမ်ထောင်သက်ကိုးနှစ်ကြာလာတဲ့အထိ တပတ်တကြိမ်လောက် သူကိုယ့်အပေါ် ဘာမကျေနပ်တာတွေ ရှိနေလဲ ၊ ကိုယ်သူ့အပေါ် ဘာမကျေနပ်တာတွေ ရှိနေလဲဆိုတာ ကလေးအိပ်ချိန်မှာ မေးမြန်းဆွေးနွေးတုန်း ၊ သဘောတူညီချက်ရယူတုန်း ၊ အပြန်အလှန် နားလည်မှု တည်ဆောက်တုန်းပါ။
ဒီလိုမလုပ်ထားဘူးဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ။ အိမ်ထောင်သက်နုသူတွေဟာ ကိုယ်တွေအကြောင်း ကိုယ်တိုင်က နှုတ်မလုံဘဲ တပါးသူကို ပြောဆိုတာ ၊ Facebook Status တွေ ပုံတွေနဲ့ ပြတာ ၊ ယောကျာ်းကိုနိုင်တာ ၊ မိန်းမကိုနိုင်တာတွေ ရွှန်းရွှန်းဝေဝေ ပြောတတ်တာတွေကြောင့် ဘေးစကားတွေ သွေးထိုးဝင်လာတဲ့အခါ နုနေတဲ့အိမ်ထောင်သက် ၊ ထင်ယောင်ထင်မှားစိတ်တွေနဲ့ လင်မယား စကားများတာ ၊ အထင်လွဲတာ ၊ ရန်ဖြစ်တာတွေဖြစ်လာတော့တာပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးအစခရီးမှာ အရမ်းချစ်ပြတတ်သူတွေက အိမ်ထောင်ရေးမှာ မသင့်မမြတ်ဖြစ်တာတွေ ၊ ကွဲတာတွေ အများစုဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဆင်းဘီးတပ်ပေးသူတွေ အနားမှာရှိနေရင် ပိုဆိုးတာပေါ့။
အိမ်ထောင်သက်ကလဲနု ၊ ကြားစကားကလည်းဝင် ၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို့ နားလည်မှုအပြန်အလှန် တည်ဆောက်ဖို့လည်းအားနည်း ၊ နှစ်ဦးဆက်ဆံရေးလည်း အဆင်မပြေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့နောက်တဆင့်မှာ ဖောက်ပြန်မှုတွေ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာမသာယာတော့ အပြင်မှာ သာယာမှုထွက်ရှာတာပေါ့။ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ငဲ့မကြည့်တတ်သူတွေက လွယ်လွယ်ကူကူ ဖောက်ပြန်ပြီး မိန်းမ မရှားပါဘူး ၊ ယောကျာ်းမရှားပါဘူးလို့ တလွဲသက်သေပြကြတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်တန်ဖိုးကျသွားတာ သူတို့မသိဘူး။ ဘယ်လိုတန်ဖိုးကျသွားတာလဲဆိုတော့ အိမ်ထောင်ဘက်က ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှု ၊ တန်ဖိုးထားမှု ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လျော့သွားတာ ၊ မရှိတော့တာတွေအပြင် သားသမီးကလည်း မိဘဖြစ်တဲ့ကိုယ့်အပေါ် တန်ဖိုးထားမှု လျော့သွားပါတယ်။ ဒီအိမ်ထောင်ထဲမှာ ကိုယ့်တန်ဖိုးလျော့လာပြီဆိုတာ သိလာလေလေ ဒီအိမ်ထောင်မှာ မပျော်လေလေပဲပေါ့။ မခံစားနိုင်တော့တဲ့နောက်တဆင့်အနေမှာ အိမ်ထောင်ကွဲတော့တာပါပဲ။
အမျိုးသားက အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုပေမယ့် “မိဘပြော တလ ၊ မယားပြော တည” ဆိုတဲ့ စကားတောင် ရှိသေးတာပဲ။ တကယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အိမ်ရှင်မက အခရာပါ။ ချစ်လို့ထူထောင်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အချစ်တွေဘာလို့ လျော့သွားပြီး အမုန်းတွေ ၊ အစိုင်အခဲတွေ ၊ မကျေနပ်မှုတွေ ဘာကြောင့် အစားထိုးဝင်လာသလဲဆိုရင် အချစ်ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းထားရကောင်းမှန်း မသိကြလို့ပါ။ နိုင်လို့ရတိုင်း စွတ်နိုင်မယ် ၊ အလျှော့ပေးလေ ရောင့်တက်လေ ၊ လုပ်ပေးလေ ပိုခိုင်းလေ ၊ လုပ်ပေးတဲ့သူရှိလေ ရေသာခိုလေဆိုရင် ချစ်လို့ယူထားတဲ့ အမျိုးသားဟာ မယက (မယားကြောက်)အဖြစ် မိဘဆွေမျိုးမောင်နှမနဲ့ အသိုင်းအဝန်းပတ်ဝန်းကျင်က သွေးထိုးတာခံရပြီဆိုရင် ယောကျာ်းမာနနဲ့ ဒူးနေရာဒူး ၊ တော်နေရာတော် လျော်သွားတော့မှာပါ။ ဒါဟာ ကိုယ်ရထားတဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရကောင်းမှန်းမသိလို့ အမျိုးသမီးတွေ လက်လွှတ်လိုက်ရတာပဲ။ ဒါဟာ အမျိုးသားတွေ ပြောင်းလဲတာထက်ကို အမျိုးသမီးတွေက အထိန်းအသိမ်းမတတ်တာပါ။
နောက်တမျိုးကျတော့ ယူကာစကတည်းက ယောကျာ်းကို ဖူးဖူးမှုတ် ဘာမှမလုပ်ကိုင်ခိုင်းဘဲ အိမ်ဦးနတ်လို ဖူးဖူးမှုတ်ထားမယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ အသားကျသွားတဲ့ယောကျာ်းဟာ နောင် သူ့အကူအညီ ကိုယ်လိုအပ်ချိန်မှာတောင် ခိုင်းမရတာမျိုးလည်း ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ၊ မီးဖွားချိန် ၊ မီးတွင်းထဲနဲ့ သားသမီးငယ်လေးတွေရှိချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေ ကူမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူ့ကို စိတ်နာလာနိုင်တယ်လေ။ ဒီမှာလည်း ကိုယ့်လိုအပ်ချက်ပါပဲ။ အိမ်ထောင်အစကတည်းက ကိုယ်တခုလုပ်ရင် သူလည်းတခုလုပ်ကျင့် ၊ အိမ်တွင်းဗာဟီရ အတူတူ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကျင့် ကျင့်ထားရမှာပါ။ သူက ယောကျာ်းလေးဆိုတော့ ကိုယ့်လောက် သေသေသပ်သပ် လုပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ချီးကျူးပါ။ ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါ။ ဘာကြောင့်လဲ။ သူကူလုပ်ပါရက်နဲ့ ကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင် အပြစ်တင်စကားပြောတာခံရရင် နောင်မှာ ကူလုပ်ချင်စိတ်နည်းလာမယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်တိုင်းကျလုပ်လို့ ပြောလာမယ်လေ။ နောင်မကူတော့ဘူးပေါ့။ ဒါဟာ သူရဲ့ ကူညီချင်စိတ်ကို ရိုက်ချိုးလိုက်တာပါ။ ဒီလိုမလုပ်သင့် ၊ မပြောသင့်ဘူး။
အိမ်ထောင်သက်နုကတည်းက ဒီလိုလေး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရှိလာခဲ့တဲ့အိမ်ထောင် ၊ ကြားစကားတွေ တိုးမဝင်နိုင်တဲ့အိမ်ထောင် ၊ ကလေးရလာရင် အခက်အခဲတွေ တွေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။ အမျိုးသမီးဟာ အရင်ကလလို ပြုပြုပြင်ပြင် ရှိနေမယ့်အစား ကလေးတာဝန် ၊ အိမ်တာဝန်တွေနဲ့ လက်မလည်လေတော့ ခင်ပွန်းကိုတောင် အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုး ရှိနိုင်ပြီလေ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ လင်မယားချင်းရှိရမယ့် နှစ်ကိုယ်တူသာယာမှု နည်းလာပြီပေါ့။ ဒီလိုအချိန်မှာ အိမ်ထောင်ရှင်မက မထိန်းသိမ်းတတ်ရင် ခင်ပွန်းဟာ အပြင်မှာ သာယာမှုထွက်ရှာပြီး ဖောက်ပြန်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က ကလေးတာဝန်နဲ့ မအားတာမို့ သူ့ကို အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် သူ့သွေးသားဖြစ်တဲ့ သူ့ကလေးနဲ့ သူ့အားလပ်ချိန်တွေ ကုန်ဆုံးခွင့်ရဖို့ ကိုယ်က ချိုချိုသာသာ ပြောဆို လမ်းကြောင်းပေးရမှာပါ။ ကလေးနဲ့သူနဲ့ရှိနေပြီဆိုရင် သားသမီးသံယောဇဉ်တွေ တက်လာပြီ။ သူ့ကို ချစ်ခင်တွယ်တာလာတဲ့ သားသမီးကိုငဲ့ညှာတတ်လာမယ်။ အိမ်မှာသာယာမှုမရှိသေးရင်တောင် သားသမီးကိုငဲ့ပြိး အပြင်မှာသာယာမှုမရှာဘဲ စောင့်ထိန်းလာမယ်။ ဒါကိုလည်း အိမ်ရှင်မက အကင်းပါးပါးနဲ့ ထိန်းသိမ်းပြောဆိုတတ်ရမှာပါပဲ။
သူကအပြင်ထွက် စီးပွားရှာချိန်မှာ ကိုယ်က အိမ်ထဲမှာ မိုးလင်းမိုးချူပ် တကုပ်ကုပ်ရှုပ်နေတာ သူနားလည်အောင် သူအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန် အလုပ်တခုလုပ်မယ်ဆို ဘာလုပ်လိုက်ဦးမယ် ၊ နောက်တခုလုပ်ရမယ်ဆို ဘာလုပ်ရဦးမယ် ကိုယ့်ဘာသာပြောသလိုနဲ့ လုပ်ကိုင်ပြောဆိုကျင့် လုပ်ထားတဲ့အခါ ကိုယ်အနားမရတာကို သူသတိထားမိလာမယ်။ ကလေးတာဝန်ဟာ မလွယ်ဘူး ၊ အချိန်သိပ်ကုန်တယ်ဆိုတာ သူသိအောင် ကလေးနဲ့သူ့ကို ရေအတူချိုးခိုင်းတာမျိုး ၊ ကစားခိုင်းတာမျိုး လုပ်စေရင်း ကိုယ်က မီးဖိုချောင်ဝင်ပါ (မီးဖိုချောင်ကိုယ်ဝင်မှ သူတို့စားရမှာဆိုတော့ မလုပ်နဲ့ပြောမရဘူးလေ။) သူနဲ့ရှိနေချိန် ကလေးအီးပါမယ်။ သူလုပ်ခိုင်းသည့်တိုင်အောင် အမြဲတမ်း ကိုယ်ပြေးမလုပ်ပါနဲ့။ တလ တကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းညီညွတ်ချိန်မှာ သူ့ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းပါ။ လုပ်ရလို့သူညည်းညူရင် ဒါဟာ သူ့သွေးသား ၊ သူမလုပ်ချင်တဲ့ ဒီအလုပ်ကို ကိုယ်က နေ့တဓူဝ မညည်းမညူ လုပ်ပေးတတ်နေတယ်ဆိုတာ နားလည်အောင်ပြောပါ။ ဒီအခါ သူသည်းမခံနိုင်တဲ့ ကလေးရဲ့ဝန်တာတွေ အပြုံးမပျက် သည်းခံနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့သည်းခံနိုင်မှုကို သူက စာနာလာမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ တနေ့တာပင်ပန်းမှုတွေကို နားလည်လာမယ်။ နောက်တဆင့်က ဖေးမကြင်နာလာမယ်။
ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက် ပြောတတ်တာကို ကျွန်မအားမပေးပါဘူး။ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြ လုပ်နေပြီး အခွင့်သာမှ လိုရင်းတိုရှင်း နားလည်အောင် ရှင်းပြလိုက်တာက ပိုထိရောက်တယ်လေ။ အိမ်ထောင်တခု သာယာဖို့ဆိုတာ စကားတွေနဲ့ မပြီးပါဘူး။ စိတ်ထဲက နှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ရှိပါမှ ချိုသာတဲ့စကား ၊ နားလည်မှု ၊ ဖေးမမှု ၊ ကြင်နာမှု ၊ ညှာတာမှု ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဆိုတာကို ခံစားရမှာပါ။ ချစ်တဲ့သူအချင်းချင်း လက်ထပ်ယူထားပြီးမှ ချစ်ခြင်းကုန်ဆုံးသွားရတယ်ဆို အချစ်ခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တိုင်က ဒီအချစ်တွေ ရေရှည်တည်မြဲအောင် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရကောင်းမှန်း မသိလို့ ဖြစ်နိုင်သလို တဖက်က သစ္စာစောင့်သိခြင်းမရှိလို့ ၊ စားပြီးနားမလည်စိတ်ရှိလို့ ၊ ငဲ့ညှာထောက်ထား ကိုယ်ချင်းစာနာမှုမရှိလို့ ၊ အဆုံးစွန်မှာ ကိုယ်တိုင်က ဒီလိုဖြစ်ဖို့ ကံပါလာတယ်လို့ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီပီ မှတ်ယူရမှာပဲ။
ကိုယ်အကောင်းဆုံး လုပ်ကိုင်ပြောဆိုရက်က အကောင်းဆုံးတွေ ပြန်မလာဘဲ အဆိုးတွေ ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမပြု မိမိမှု …. ဒီလိုလူကို အိမ်ထောင်ပြုမိခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အမှားပေပဲပေါ့။ အမှားတိုင်းဟာ ပြင်ချင်ရင် ပြင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြင်ယူမလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲပေါ့။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်မပြုခင် အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ်ရည်ရွယ်တဲ့သူကို နားလည်သထက်နားလည်အောင် လေ့လာပါ။ သူ့မိသားစုနဲ့ သူ့အသိုင်းဝန်း ၊ သူ့ခံယူချက် ၊ သူ့ရည်မှန်းချက် ၊ သူ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အကဲဖြတ်ပါ။ လက်ထပ်ပြီးပြီဆို အချင်းချင်း အပြန်အလှန် နှစ်ချီလို့ နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်ခိုင်မြဲပါမှ ကလေးတာဝန်ခွဲဝေမှု သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ ကလေးယူပါ။ ဒီအခါ အိမ်ထောင်လဲသာယာ ၊ ကလေးလဲပျော် ၊ ကိုယ်လဲပျော် ၊ သူလဲပျော်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ တည်ပြီးသားအိမ်ထောင်တိုင်း ခိုင်မြဲစေချင်သလို မိသားစုတိုင်းကိုလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ မိသားစုလေး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%81%8a-%e1%80%96%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac/feed/0ရှေ့သို့မဆက်ခင် အနောက်သို့ မျှော်တွေးပါ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%82%95%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%af%e1%82%94%e1%80%99%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%9e/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%82%95%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%af%e1%82%94%e1%80%99%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%9e/#comments Sat, 08 Aug 2015 02:27:10 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=10729
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ခြေလှမ်းကျွံသွားရင် “တခုလပ်”ဆိုတဲ့ နာမည်ပျက်နဲ့ ပြန်ထွက်ရတာမျိုးပါ။ နှစ်အိမ်ထောင်ပျက်ရင် နှစ်ခုလပ်ဖြစ်ပြီး အခါခါပျက်ရင်တော့ အခါခါလပ်သူ ၊ အိမ်ထောင်ဆက်များသူ ဖြစ်သွားတော့တာပဲ။ သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုမှ ထူထောင်ချင်တယ်ဆိုရင် တသက်စာ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းတော့မယ့်သူကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘက ဇွတ်အတင်းစီမံလို့ သုံးသပ်ချိန်တောင်မရဘဲ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုက်ရသူတွေကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် မိဘစီမံတာဟာ ကိုယ့်အနာဂါတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်သိနားလည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနာဂါတ် ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်မရှိတဲ့ မိသားစု ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အုပ်ထိန်းပုံကို ယနေ့ခေတ်ကာလအချိန်အထိ ချုပ်ကိုင်ထိန်းသိမ်းထားတုန်းဆိုရင်တော့ စောဒကတက်လို့ မရဘူးပေ့ါ။ ပေဖြစ်တုန်းတော့ ခံရလိမ့်ဦးမှာ မဟုတ်လား။ ချစ်လို့တွဲတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေ ချစ်တာပဲသိတယ်။ အတူနေရပြီးရော ။ ပျော်စရာအနာဂါတ်ကို အတူဖန်တီးမယ်ဆိုပြီး လက်ထပ်လိုက်တယ်။ အချစ်မျက်မှန်တပ်ထားလို့ အချစ်တွေဖုံးနေတုန်း မမြင်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အကျင့် ၊ စိတ်ထား ၊ ခံယူချက် […]]]>
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%82%95%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%af%e1%82%94%e1%80%99%e1%80%86%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%9e/feed/ 2